I-Forex Glossary | I-FXCC
Umbiko wesitatimende se-akhawunti
Umbiko wesitatimende se-akhawunti ye-FXCC ubonisa konke ukuthengiswa okwenziwe ku-akhawunti yokuhweba esikhathini esithile. Ngokwesibonelo; wonke umsebenzi (umyalelo) iklayenti ithatha / ingene emakethe, izindleko ze-oda ngayinye, ibhalansi ye-akhawunti ngesikhathi esithile kanye nokulinganisela okulinganiselwe ngemuva kwesenzo ngasinye kwi-akhawunti kubalwe.
Inani lamanje le-akhawunti yeklayenti, lokhu kufaka ukulingana okuphelele (inani lemali engenayo egcinwe / ehlala ku-akhawunti) nanoma yiziphi izinguquko ngenxa: inzuzo nokulahlekelwa ezikhundleni ezikhona futhi ezivaliwe, izikweletu kanye nezikweletu ezivela kwi-rollovers yansuku zonke, kanye namacala kusuka emisebenzini njenge: amakhomishana, izimali zokudlulisela, noma izimali ezihlobene nebhange, uma izimali ezinjalo zingasebenza.
Inqubomgomo yezinga lokushintshaniswa elithathwe ngamabhange aphakathi. Imali yesizwe "ikhonjiwe" (ihlelwe) kumali enkulu (imali enamandla, njenge-dollar yase-US noma i-Euro). Isibonelo samanje siyinhloko ye-franc yaseSwitzerland eya e-euro. Umgogodla ungalungiswa, ngokujwayelekile njengokuthuthukiswa kwesimo sokuncintisana kulelizwe emakethe yokuthekelisa.
I-ADX; inkomba yokuqondisa ejwayelekile
I-Average Directional Movement Index (i-ADX) yenzelwe inkomba yokuhweba ukuze kutholakale amandla alo mkhuba ngokulinganisa ukunyakaza kwamanani ngendlela eyodwa. I-ADX iyingxenye yesimiso se-Directional Movement esakhiwe futhi sanyatheliswa nguJ. Welles Wilder futhi siyisilinganiso esivela kuzinkomba ze-Directional Movement.
Lokhu kuhlobene neSivumelwano Sathengi se-FXCC. Wonke amaklayenti kumele afunde futhi abamukele imigomo yebhizinisi ngokusayina (ngekhompiyutha uma kudingekile) isivumelwano seKhasimende se-FXCC, ngaphambi kokuvula i-akhawunti nge-FXCC.
I-platform ye-FXCC yokuhweba.
Uhlelo Lokusebenza Olusebenzayo - API
Lokhu yisixhumi esibonakalayo esenza uhlelo lwesofthiwe luxhumane nezinye izinhlelo zesofthiwe. Ngokubhekisela kokuhweba kwangaphambili, i-API ibhekisela ku-interface, okwenza isiteji sixhumane nemakethe ye-Forex. Ama-API aqukethe izici zokuthuthukisa okuvumela ukukwabelana ngolwazi, njengokuthi: izinkomba zangempela zesikhathi sangaphambili zangaphambili nezokuhweba / ukukhishwa.
Inani lemali landa, noma liqinisa, ekuphenduleni ukuthuthukiswa kwezomnotho ngakho-ke ukuphendula kwezimakethe.
Yigama elisetshenziswe lapho abathengisi be-forex ngesikhathi esifanayo bethengisa futhi bathenga izinsimbi zemali ezifanayo (noma ezilinganayo) ngenhloso yokuzuza emanzini noma / kanye nokuhamba kwemali.
Intengo lapho imali, noma ithuluzi linikezelwa ukudayiswa ngu-FXCC, noma elinye iqembu lokuncintisana. Inkokhelo yokubuza noma yokunikela ngempumelelo intengo iklayenti izocatshangwa lapho ezama ukuthenga noma ukuhlala isikhathi eside.
Noma yikuphi okuhle okunenani lokushintshaniswa eliyisisekelo.
I-ATR; ububanzi obuyiqiniso bobubanzi
I-Average Value Range (ATR) inkomba ilinganisa ubukhulu benkathi ngaphansi kobubanzi bokubuka, kucatshangelwa noma yiliphi igap kusukela ekupheleni kwesikhathi sokuhweba esedlule.
Umthengisi owamukelekile kanye nesibonakaliso esivela emhlabeni wonke, ukuze uthole i-AUD / USD pair currency.
Leli yinkampani yesithathu ukuthi iklayenti inikeza igunya lokuhweba, noma unikeza ukulawula phezu kwe-akhawunti yekhasimende. I-FXCC ayifuni, ngokufaka noma ngokunye, ukuvumela noma ukuvumela izindlela zokusebenza zommeli ogunyaziwe. Ngakho-ke i-FXCC ayitholi mthwalo wemfanelo yokuziphatha kommeleli ogunyaziwe.
Leli yindlela yokuhweba lapho imiyalo ifakwa ngokuzenzekelayo uhlelo, noma uhlelo, oluvame ukubhekwa ngokuthi lusebentisa abeluleki bezazi noma ama-EA, ngokuphambene nomthengi ngokubeka ngesandla imishini yabo emakethe ngokusebenzisa ipulatifomu yabo. Ama-oda wokuthenga noma okuthengisa athengiswa emakethe ngohlelo oluzokwenziwa uma imingcele isethwe uhlelo lomthengisi, ekugcineni ihlangene.
Isilinganiso semali engenayo yehora
Imela inani elilinganiselwe lokuthi abasebenzi bakhokhelwa ngehora ngenyanga enikeziwe.
Umnyango we-FXCC we-Back Office usebenzelana nokuhlelwa kwe-akhawunti, izimali ezidluliselwa kwi-akhawunti yomthengi, izinkinga zokubuyisana kwezohwebo, imibuzo yenkampani kanye neminye imisebenzi ngokuvamile ngokuphathelene nomsebenzi ongahileleki ngokuqondile ekuthengeni, noma ekuthengiseni i-pair pair currency.
Yindlela lapho uhlelo lokuhweba luhlolwe khona ngokusebenzisa idatha yomlando ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlelo lokuhweba lungasebenza, ukuze ugweme izingozi zokuhweba zentengo yomthengisi.
Isitatimende esifingqa umehluko ngokubaluleka okuphelele phakathi kokukhokha ngaphakathi nangaphandle kwezwe isikhathi esithile. Kuyaziwa nangokuthi ibhalansi yezinkokhelo zamazwe ngamazwe njengoba kufaka phakathi ukuthengiselana phakathi kwabahlali bezwe kanye nabangewona abameli.
Ukulingana Kwezokuhweba, noma Ukulinganiswa Kwezohwebo
Umehluko phakathi kokungeniswa kwamanye amazwe kanye nokuthumela kwawo isikhathi esithile. Kubuye kube yingxenye ebaluleke kunazo zonke ye-akhawunti yamanje yamanje. Esimweni lapho amazwe athunyelwa ngaphandle kokungeniswa kwawo, leli zwe linemali yokuhweba, futhi ngokufanayo, uma izwe lisesimweni sokulahlekelwa kwezebhizinisi isikhathi eside (i-trade gap), imali ehambisana nabalingani bayo bezokuhweba kuyokwehla, noma ukwehlisa amandla, okwenza izindleko zokungeniswa zibize futhi zithengise ezishibhile kubalingani bokuhweba.
Ibhange Lokuhlala Kwamanye amazwe (BIS)
Kuyinto inhlangano yezezimali yomhlaba wonke ekhuthaza ukubambisana kwamabhange asezindaweni eziyinhloko ngenhloso yokukhuthaza ukuzinza nokukwabelana ngolwazi phakathi kwamabhange asemhlabeni jikelele. Enye inhloso ukuba kube isikhungo esiyinhloko kukho konke ucwaningo lwezomnotho.
Ichazwe njengelunga lomkweletu olunikezwa yibhange kumakhasimende, lokhu kubuye kubhekiswe ngokuthi "umugqa".
Usuku lwebhange (noma usuku lwebhizinisi)
Usuku lwebhange usuku lwebhizinisi ebhange. Kuhlanganisa zonke izinsuku lapho amahhovisi ebhange evuliwe amabhizinisi emphakathini, lapho ibhizinisi lihlanganisa yonke imisebenzi yasebhange. Usuku lwebhange ngokuvamile luyizinsuku zonke ngaphandle kweMgqibelo, ngeSonto nangeholide echazwe ngokusemthethweni.
Ibhange laseJapan (i-BOJ)
Ibhange eliphakathi laseJapane.
Zingasetshenziswa njengengqikithi yekheshi futhi liyiphepha elikhishwa ibhange eliyinhloko njengolunye uhlobo lwezinto ezisetshenziselwa ukuxoxisana (i-promissory note), ekhokhwa kumthengisi ngokufunwa.
Kuyinani lesithakazelo esekelwe lapho ibhange eliphakathi liboleka imali ohlelweni lwabhange lwasekhaya.
Lokhu kubizwa ngokuthi yi-currency yokuqala ngombhangqwana lwemali. I-currency yasekhaya iyimali lapho umtshalili (umkhipha), egcina incwadi yayo yama-akhawunti. Ezimakethe ze-FX, i-US Dollar ngokuvamile ibhekwa njengesixazululo semali seziningi zezingcaphuno ze-FX; izingcaphuno zikhonjiswe njengeyunithi ye $ 1 USD, ngokuhambisana nenye enye imali ecaphuniwe kulesibili. Okungafani kulo mhlangano yilokhu: i-British Pound, i- Euro ne-Dollar yase-Australia.
Isilinganiso sokuqala yisilinganiso senzalo ukuthi ibhange eliphakathi, njengeBhange laseNgilandi noma i-Federal Reserve, lizokhokhisa ukuboleka imali kumabhange ezentengiselwano. Izingozi ezingaphezulu zababoleka zizokhokha imali encane ngaphezu kwesilinganiso sezinga, ababolekisi bekhwalithi engaphansi bayokhokha izinga eliphakeme, ngenani lezinga lesisekelo.
Ingxenye eyodwa kwephesenti eyodwa. Ngokwesibonelo; umehluko phakathi kwe-3.75% no-3.76%.
Intengo iboniswe ngentengo yonyaka yokubuyisela noma ngokuvuthwa kokuvunwa esikhundleni senani ngokwemali.
Imakethe ye-Bear yisimo semakethe lapho kunenkathi yokuqhubeka (ngokujwayelekile) ewa amanani omkhiqizo othile wokutshala izimali.
Ukushintsha esimweni semakethe lapho abatshalizimali kanye / noma abathengisi, abancane emkhakheni wokutshala izimali, kufanele babuyisele imali yokutshala imali ngentengo ephakeme kunokuba bayithengise ngakho, ngaphandle kwalokho isimo sezimakethe esikhuphukayo sizolahleka ukulahlekelwa i-akhawunti, noma umsebenzi wabo ngamunye. Ibhere elibizayo lingaba umcimbi wamazwe omhlaba owadalwa ezimakethe zokutshala izimali, ngokuvamile ngebhange eliphakathi noma abenzi bemakethe.
Umtshali-zimali okholelwa ukuthi intengo yomkhiqizo wokutshalwa kwezimali uzowa.
Ibhuku le-Beige yigama elivame ukusetshenziswa elisetshenziselwa umbiko we-Fed, oshicilelwe ngaphambi komhlangano we-FOMC ngezintela zenzalo. Itholakala ngezikhathi zomphakathi eziyisishiyagalombili (8) ngonyaka.
Intengo lapho i-FXCC (noma enye iphathi yangaphandle) inikezela ukuthenga pair pair currency kusuka iklayenti. Kuyinto intengo iklayenti izocatshangwa uma ifuna ukuthengisa (ihamba kancane) isikhundla.
Umehluko phakathi kwebhizinisi nokubiza.
Ibeka ngokujwayelekile kumadijithi amabili noma amathathu okuqala ngentengo yemali. Ngokwesibonelo; Izinga lokushintshaniswa kwe-EUR / USD le-.9630 lisho 'i-0' njengesibalo sokuqala. Ngakho-ke intengo yayizoba yi-0.9630, "nomuntu omkhulu" oyi-0.96.
I-Bollinger Band (BBANDS)
Isibonisi sezobuchwepheshe esilinganisa ukungazami, okwakhiwa nguJohn Bollinger. Banikeza incazelo ehambelanayo yezinga eliphezulu nephansi, lapho singakwazi khona ukugcina amanani aphezulu ebandleni eliphezulu futhi njengasezingeni eliphansi.
Phula, noma Phuma
Ukuphumula yigama elisetshenziselwa ukuchaza ngokuzumayo, okusheshayo okusheshayo (noma ukuwa) ngentengo yensimbi eholele ekuphuleni ngokusebenzisa izinga lokusekelwa noma ukumelana okulindelekile.
Isivumelwano se-Bretton Woods se-1944
Lesi yisivumelwano "se-WWII" esibangele amazinga wokushintshaniswa okuhleliwe futhi usethe intengo yegolide. Isivumelwano senziwa phakathi kwezihambeli ezivela ezizweni ezihlukene ezizimeleyo ezimele umnotho omkhulu wezwe.
I-agent, njenge-FXCC, owenza ama-oda wokuthenga nokuthengisa imikhiqizo yezezimali, njenge: zezimali nezinye izinsimbi ezihlobene, kungaba ikhomishana, noma inzuzo ekusakazeni.
Ukwakha (Izindlu) Izimvume
Inombolo yamaphrojekthi wokwakha asanda kuvunyelwa ahlinzekwa nguhulumeni noma enye inhlangano elawulayo ngaphambi kokuba ukwakhiwa kwangempela kuqale ngokomthetho.
Isikhathi eside sokwenyuka kwentengo yomkhiqizo othile wokutshalwa kwezimali.
Umtshali-zimali okholelwa ukuthi amanani emikhiqizo ethile yokutshalwa kwezimali izokhula.
I-Central Bank yaseJalimane.
Noma yiluphi usuku lapho amabhange ezentengiselwano evulekile ibhizinisi, ngaphandle kweMgqibelo noma ngeSonto, esikhungweni sezimali esikhulu sezwe.
Thenga i-OrderLimit Order
I-oda elifaka imiyalelo ekhethekile yokwenza ukuthengiselana ukuthenga i-atset ngentengo ecacisiwe noma ephansi. Akusebenziswanga kuze kufike intengo yemakethe (noma ephansi) intengo yemkhawulo. Ukuthenga umkhawulo wokukhawulela okwenzeke ngesikhathi esisodwa, kuba umyalo wemakethe ukuthenga ngentengo yamakethe yamanje.
Ukumiswa kokuthenga umyalo wokuma obeka ngaphezu kwenani lamanje lokusebenzisana lamanje, alisetshenziswa kuze kube yilapho imakethe yokubuza ikhona (noma ngenhla) intengo yokuma. Ukuthengiswa kwe-stop order okwenzeke ngaphambili, kuba umyalo wemakethe ukuthenga ngentengo yamanje yamakethe.
Leli gama elisetshenziselwa imakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe ngezinga le-USD / GBP.
Uhlobo lwekhadi elinamabhuloki afana nokubukeka kwamakhandlela. Ikhombisa amanani aphezulu namanani aphansi, kanye namanani okuvula nokuvala.
Inani elingabalwa noma eliphikisiwe kusuka ku-akhawunti yokubamba idijithi yemali lapho okungafani khona kwezintandokazi zobusuku bezingxenye ezihlukile.
Ngokuphathelene nokuthengiswa kwe-Forex, ukuhweba ukuhweba kuyindlela lapho umtshali-zimali eboleka imali ngenani eliphansi lentela, ukuze atshale imali engase ibe nokubuyisela okuphezulu. Leli qhinga livame kakhulu emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe, lapho amazinga ebhange ebolekayo ehlukene ehlukene.
Lona usuku olufanayo lokuhlala kwesibopho.
Ukubhekisela ekuthengisweni kokushintshaniswa kuhlelwe ngosuku lokuthengiselana kuvunyelwene ngalo.
I-cash on deposit ihambisana nenani lemali egcinwe ku-akhawunti, ngokucatshangelwa noma ngaphezulu kwezindawo ezivaliwe ezivaliwe, inzuzo nokulahlekelwa, kanye nezinye izikweletu, noma izikweletu, njenge-rollovers, kanye nekhomishana (uma ikhona okusebenzayo).
I-CCI, i-Commodity Channel Index
I-Commodity Channel Index (CCI) iqhathanisa intengo yamanje yamanje emakethe ngenani elilinganiselwe elibhekwe phezu kwefasitela elijwayelekile lezinkathi ze-20.
Ibhange, elinesibopho sokulawula inqubomgomo yezimali yezwe noma yezifunda. I-Federal Reserve yibhange eliphambili le-United States, i-European Central Bank yiyona ebhange elikhulu laseYurophu, iBhange laseNgilandi yibhange eliyinhloko laseNgilandi futhi iBhange laseJapan liyibhange eliyinhloko laseJapane.
I-Central Bank Intervention
Isenzo esenziwa yibhange eliphakathi, noma amabhange aphakathi angena emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe emzamweni wokuthinta ukutholakala nokudingwa okungaqiniseki, ngokuthenga ngokuqondile (noma ukuthengisa) ngezimali zangaphandle.
Ikhomishini yezokuThengiswa kwezokuThuthukiswa komkhiqizo wezokuThuthukiswa komnotho, leli yi-US Federal regulatory agency ezayo yezimakethe ezithengiswa ezimakethe zempahla, kubandakanya ikusasa lemali.
Liyigama elisetshenziswe lapho intengo iqukethe phakathi kwemigqa emibili ehambisanayo (amazinga wokusekela nokumelana) isikhathi esithile.
Lokhu kubhekwa njengomuntu ohlola ulwazi lomdwebo kanye namashadi wedatha yomlando, ukuze azame ukunquma izitayela, noma amaphethini wokuhamba kwentengo, ezosiza ukubikezela isiqondiso nokungazami komkhiqizo othile wokutshalwa kwezimali. Luhlobo oluthile lomsebenzi wokuhlaziywa kwezobuchwepheshe.
I-CHF yisifinyezo se-Swiss franc, imali yaseSwitzerland ne-Liechtenstein. I-franc yaseSwitzerland ibizwa ngokuthi "i-Swissie" ngabadayisi bemali.
Izimali ezitholakalayo ngokukhululekile, okubangelwa ukuhlelwa kwempahla, noma ukuhweba.
Iklayenti noma iKhasimende
Umnikazi we-Akhawunti ye-FXCC. Iklayenti, noma umnikazi we-akhawunti angaba: umuntu ngamunye, umphathi wemali, inkampani yezinkampani, i-akhawunti ye-trust, noma iyiphi inhlangano esemthethweni enentshisekelo ekubalukeni nasekusebenzeni kwe-akhawunti.
Isimo esivaliwe sikhombisa isikhundla esingekho njengoba umthengisi ephuma emakethe ngaphansi kokuqonda kwakhe. Isibonelo, indawo yokuthengisa izobe isilinganiswa ngesikhundla sokuthenga futhi ngokuphambene nalokho.
Imali ukuthi umdayisi onjengeFXCC angase akhokhe ngezohwebo.
Ama-pair of Commodity
Kunezimbhangqwana ezintathu ze-forex ezibandakanya izimali ezivela emazweni anenani elikhulu lempahla / izimpahla zamaminerali zemvelo. Amabili wezimpahla kukhona: USD / CAD, USD / AUD, USD / NZD. Amabili wezimpahla ahlobene kakhulu nezinguquko ezintengo zamanani. Abathengi abafuna ukuthola ukuguqulwa kwezimakethe zezimpahla zezimpahla, ngokuvamile babheka ukuhweba lezi zibini.
Idokhumenti yekhompuyutha, noma eyanyathelisiwe eyabelana nabalingani abachaza yonke imininingwane efanele yokuthengiswa kwezezimali.
Ukuhlanganiswa yigama elisetshenziselwa ukuchaza isikhathi lapho amanani aphansi kakhulu futhi ahamba eceleni.
Isilinganiso sezinga eliphelele lokuzethemba elizungezile izimo zezezimali emnothweni nomthengi siqu isimo sezimali.
Lokhu kuchazwa njengesilinganiso sanyangazonke soshintsho emazingeni amanani ebhasikidi lezimpahla zabathengi, ngokuvamile kufaka phakathi: ukudla, izingubo, nokuthutha. Amazwe ahlukahluka endleleni yawo yokuqashiswa kwemali kanye nemali yokukhokhela imali.
Ukuqhubeka yimigomo evame ukusetshenziswa uma kulindeleke ukuthi lo mkhuba uzodlulisa inkambo yayo.
Isivumelwano se-OTC (Over Counter) esenziwe nge-FXCC ukuthenga noma ukuthengisa inani elibekiwe lemali ethile, ngenani elibekiwe lenye imali, lapho ukukhokha kusethwe ngosuku olubekwe ngalo (ngokujwayelekile usuku lwendawo). Izinga lokushintshaniswa kwamanye amazwe lawo maqembu amabili atholakale ngenkontileka ukuze anqume inani lezinkontileka.
Izinga elisetshenziselwa ukuguqula izinzuzo ezilahlekile zama dollar angama-US angama-dollar angama dollar, ekupheleni kosuku ngalunye lokuhweba.
Imali engathengiswa ngokukhululekile ngezinye zezimali ngaphandle kwemingcele yokulawula. Ngokuvamile zihlotshaniswa nemnotho evulekile futhi ezinzile, futhi amanani abo ngokuvamile anqunywa ngokunikezwa nokudingwa emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe.
Kuyinto inqubo eguquguqukayo futhi imigomo isetshenziselwa ukuchaza isenzo senani ngesikhathi sokuguqulwa okuyingxenye yesimo.
Ummeleli wasebhange wangaphandle, ohlinzeka ngezinsiza egameni lesinye isikhungo sezezimali, esingenalo igatsha esikhungweni sezimali esifanele, isibonelo; ukwenza lula ukudluliselwa kwezimali noma ukuqhuba ukuhwebelana kwebhizinisi.
Imali yesibili ngobili lwemali. Ngokwesibonelo; ku-pair pair currency EUR / USD, imali ye-counter kuyinto i-USD.
Umuntu noma ibhange elibamba iqhaza ekushintsheni kwezezimali zomhlaba jikelele futhi ungumbhalisi wezinkontileka ezifana nenkokhelo.
Libhekisela ekutheni izwe lingabamba iqhaza noma lithonye inani lemali. Inani lentengo emkhakheni wokuthengisa umkhawulo kufanele ube ngaphezu kwentengo yamanje yokuthengiswa kwebhizinisi kuhilela ukuhlolwa kwezombusazwe, ezombusazwe kanye nezendawo zomhlaba othile, ukuze kutholakale ukuzinza kwayo konke.
Ukwenza ukuthengiswa okugcina ukuvala isikhundla.
Lokhu kubizwa nangokuthi "isikhonkwane esilungiswayo". Lokhu kuchazwa ngokuthi izinga lokushintshaniswa kwezwe lihlelwe, ngokuphathelene nelinye imali.
Inkontileka yemali yesiphambano
Inkontileka yendawo yokuthenga, noma ukuthengisa imali eyodwa yangaphandle, ngokushintshanisa enye imali ethile yangaphandle. Izimali ezishintshanisiwe akuzona i-US Dollar.
Imali engahlanganisi i-USD.
Izinga lokushintshanisa phakathi kwezimali ezimbili, noma yiziphi izimali ezisemthethweni zezwe futhi zombili zivezwa ngokwemali yesithathu.
Ama-Cryptocurrencies yi-digital, imali ye-virtual usebenzisa ukubethelwa kwe-cryptography ngokuphepha kokuthengiselana. Njengoba engakhishwa ngamabhange asezindaweni eziphakathi, noma ohulumeni babhekiselwa ekubeni yizinto eziphilayo, okuyinto eqondiswayo ekuvimbeleni ukuphazamiseka kukahulumeni, noma ukuxhaphazwa, njengeBitcoin.
Kuyinto yensimbi noma iphepha lephepha, uma lisetshenziselwa noma lijikeleza, njengokusho kokushintshanisa, ngokusakazwa ngokukodwa kwemali ebhange kanye nezinhlamvu zemali.
Kuvame ukusetshenziselwa ukunciphisa ingozi yokukhishwa kwemali, futhi kuthiwa yikhetho lezimali lapho isilinganiso esilinganisiwe sebhaksi sisetshenziselwa ukukala inani lokuzibophezela kwezezimali.
Luhlelo lwe-electronic olusetshenziselwa ukuguqulwa kwezimali; i-calculator eguqula inani lenkokhelo eyodwa ibe yinani lenye imali. Ngokwesibonelo; amadola ama-euro. Abaguquli kufanele basebenzise izingcaphuno zemakethe zakamuva ezitholakalayo ezimakethe zezimali zangaphandle.
Izinketho zemali zinikeza umthengi ilungelo, kodwa hhayi ukuzibophezela, ukushintshanisa inani elithile lemali elenziwe ngemali eyodwa ibe yinye ngentengo ehleliwe ngosuku olucacisiwe.
Ichazwe njengezinhlobo ezimbili zezimali zokuthengiselana kwamanye amazwe. I- 'EUR / USD' yisibonelo sombhangqa wemali.
Ingozi yokushintsha okungekho emalini ekushintsheni amazinga.
Lezi yizikhombisi ezintathu zezinhlamvu ezidalwe yi-ISO (Inhlangano Yomhlaba Wonke yokwenza) futhi ngokuvamile isetshenziselwa indawo yamagama egcwele lwemali. Isibonelo: USD, JPY, GBP, EUR, ne-CHF.
Inyunyana ebhekiswe kakhulu kwezezimali yi-Eurozone. Kuyinto isivumelwano phakathi kwamazwe amabili noma ngaphezulu ukwabelana ngemali ejwayelekile (noma isikhonkwane), ukuze balondoloze amazinga abo okushintshaniswa ukuze bagcine inani lemali yabo ezingeni elithile. Amalungu enyunyana abuye ahlanganyele nenqubomgomo eyodwa yokushintshanisa imali nokunye.
Isicelo se-akhawunti yekhasimende
Inqubo yohlelo lokusebenza lwe-FXCC okuyinto wonke amakhasimende okufanele agcwalise futhi athumele ukwamukelwa ngu-FXCC, ngaphambi kokuba ukuthengiselana kwenzeke.
Ukunqunywa kwansuku zonke (ukuvala usuku lwebhizinisi)
Leli iphuzu elilodwa ngesikhathi, ngosuku oluthile lwebhizinisi, olumele ukuphela kwalowo suku webhizinisi. Usuku lokuhweba kwanoma iyiphi inkontileka engena ngemuva kokunqunywa kwansuku zonke, kubhekwa njengokwenziwa ngosuku olulandelayo lebhizinisi.
Ukuthenga noma ukuthengisa i-oda ukuthi uma ingakapheli ngosuku oluthile, likhanselwa ngokuzenzakalelayo.
Libhekisela ekuhwebeni livuliwe futhi livaliwe ngosuku olufanayo.
Abacwaningi nabadayisi abathintekayo kwimikhiqizo yokutshala izimali, ezibekwe eceleni ngaphambi kokuvalwa kosuku olufanayo lokuhweba, bachazwa njengabahwebi bosuku.
Abathengisi bangase bakhethe ukugcina amarekhodi azo zonke izinto ezenziwayo ngesikhathi esithile. I-blotter yokusebenzisana yomuntu siqu iqukethe lonke ulwazi oluyisisekelo elihambisana nokuthengiselana. Umthengisi we-forex angase ahlanganise ulwazi olunjengezikhundla zokuvula nokuvala izimali, eziqaliswe umhwebi.
Ngosuku lokuthengiselana ngalo okuvunyelwene ngawo.
Izimakethe ze-Forex zivulekile i-24 / 5, ngakho-ke izikhungo eziningi zinezinkampani ezisebenza ezindaweni ezihlukahlukene. Ukuphatha amatekisi kuyatholakala ngaphandle kwemakethe ye-forex; emabhange nasezinkampanini zezezimali, ukuze enze ukuhweba ezinqolobaneni eziningi. Ukuphatha ama-desks kuma-broker firms, lapho ukuhweba forex njengomthengisi wezitolo, ngokuvamile ubeka izingcaphuno zabo futhi usakazeka lapho enikeza ukuhweba kwangaphambili kumaklayenti abo, ngokungafani nokufinyelela emakethe ngokuqondile, nokho, isibonelo, ngokuqondile ngezindlela zokucubungula.
Lena yindlela eyinhloko yokurekhoda ulwazi oluyisisekelo oluphathelene nanoma yikuphi ukuthengiswa kwezezimali.
Umuntu (noma oqinile) osebenza njengenhloko, kunokuba abe i-agent, ekuthengisweni kwezimali zangaphandle (ukuthenga noma ukuthengisa). Abathengisi bahweba ngokwabo, bahweba i-akhawunti yabo / s futhi bathathe ingozi yabo.
Lokhu kuchazwa ngokuthi ukuphulwa kwenkontileka yezezimali.
Ibhalansi engalungile yokuhweba.
I-DEMA, (isilinganiso seminyaka emibili eshukumisayo sokuhamba)
Idalwe nguchwepheshe uPatrick Mulloy, imizamo yokuDlula kokuPhezulu kokuPhezulu (DEMA) yokuzama ukuhlinzeka isilinganiso esiphezulu ngokubala indlela yokwenza isilinganiso esheshayo, okungenzeka nge-lag encane kunokulinganisa okujwayelekile okuhambayo okuvelayo. Ukubala kuyinkimbinkimbi kakhulu kunezinga elihambayo.
Linciphisa inani lemali elihlobene nezinye zezimali, ngenxa yamandla emakethe.
Lesi yisilinganiso sobukhulu bevolumu futhi sibonakaliso sokuthengwa kwempahla etholakalayo ngenjongo yokuthengiselana (njengesibonelo) pair pair currency, endaweni ethile ngesikhathi.
Ngokuphathelene nokuhweba ngemali lokhu kuyolwazi oludingekayo ukuze uqedele ukuthengiselana kwezimali zangaphandle, isibonelo; igama, isilinganiso, nezinsuku.
Ukulinganisela ukulinganisa okuphansi kwezimali zezwe ngokubhekiselele: enye imali, iqembu lezezimali, noma njengezinga elijwayelekile. Ukulinganisa uhlelo lwezinqubomgomo zemali ezisetshenziswe amazwe anezinga lokushintshaniswa okuhleliwe, noma izinga lokushintshaniswa elincane. Ukuhlaziywa kwenziwa nguhulumeni kanye nebhange eliphakathi elikhipha imali. Izwe lingadala imali yalo, ngokwesibonelo, ukulwa nokungalingani kwezohwebo.
Lesi sibalo sibalwa njengenetha lentela nanoma yikuphi ukuzibophezela komuntu siqu okuhleliwe.
Ukuzivocavoca kungaba nomphumela omuhle noma omubi futhi kuyisignali yokushintsha kwendlela yokunyakaza kwentengo.
Deutsche Mark. Imali yangaphambili yaseJalimane ngaphambi kokuthi ithathelwe i-euro.
I-DMI, inkomba yokuqondisa okuqondisayo
I-Directional Movement Indicators (i-DMI) yizingxenye zesistimu yezinkomba ezihamba phambili ezidalwe futhi zanyatheliswa ngumsunguli wezinkomba eziningi zokuhweba, uJ. J. Welles Wilder. Zibalwa ngokulandelana ne-Average Directional Movement Index (ADX). Izinkomba ezimbili zihlelwe, i-DI DI (+ DI) ne-DI Negative (-DI).
Ikhandlela elikhanyiswayo lapho inani elivulekile nelivaliwe lingalingana. Imelela ububanzi obukhulu kakhulu phakathi kwezinga eliphezulu nephansi, kepha uhla oluncane kakhulu phakathi kwentengo evulekile neyokuvala futhi ibonakala njengesiphambano noma isiphambano esiphenduliwe.
Izinga le dollar lichazwa njengezinga lokushintshanisa lwemali ethile ngokubambisana nedola (USD). Amazinga amaningi okushintshanisa asebenzisa idola njengengqikithi yezimali kanye nezinye zezimali njengezimali zemali.
Lokhu kuchazwa njengezindleko zenzalo ezisebenza ekufakweni, noma imali yokutshala imali ezweni langempela.
Igama elisetshenziselwa abameleli be-FXCC ukuze kubonise ukuthi ukukhuluma ngamazwi kuye kwenziwa futhi manje kuyisivumelwano esibophezelayo.
Isetshenziselwa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe njengephethini leshadi elingase libonise ukuthi kungenzeka yini ukunyakaza kwamanani wesikhathi esizayo
Isetshenziselwa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe njengokwakheka kwephethini yeshadi okungabonisa ukunyakaza kwentengo ezayo.
I-Dovish ibhekisela kumzwelo noma ithoni yolwimi esetshenziselwa lapho ibhange eliphakathi lifuna ukugqugquzela umnotho futhi akunakwenzeka ukuthatha izenzo ezinonya ngokuphathelene nokwehla kwamandla emali.
Ukuhleleka Kokugcina Okungapheliyo
Kuyinkomba yezomnotho ebonisa imiyalo emisha eyabekwa nabakhiqizi basekhaya esikhathini esiseduze. Ilinganisa amandla okukhiqiza futhi kusiza abatshalizimali ukuthi babone izitayela ekukhuleni komnotho.
Ichazwe njengesenzo esithathwe yibhange eliphakathi, ngenhloso yokukhulisa imali, ngenhloso yokukhuthaza umsebenzi wezomnotho, ngokuyinhloko ngokukhuthaza ukukhuphuka kwamanani emali.
Lena ikhalenda esetshenziselwa ukuqapha izinkomba zezomnotho, amamethrikhi, idatha kanye nemibiko okumele ikhishwe yizwe ngalinye, isifunda kanye nokuhlaziywa kwezomnotho okuzimele okuqinile. Ngokuya komthelela onawo ezimakethe, ukukhishwa kwedatha kuvame ukuhlanganiswa ngokufanele; labo ababikezelwe ukuthi babe nomthelela omkhulu ngokuvamile bachazwa ngokuthi "umthelela ophezulu".
Isibalo ngokuvamile esikhishwe uhulumeni wezwe, esibonisa ukukhula kwezomnotho okwamanje okuhambisana nenkomba.
Izinga lokushintshana eliphumelelayo
Kuyinkomba echaza amandla e-currency efana nebhaksi lezinye zezimali. Kungabuye kubonakale njengomzamo wokufingqa imiphumela emalini yokuhweba kwezwe yezinguquko zezimali zayo ngokumelene nezinye zezimali.
Ukudluliswa kweSikhwama se-Electronic
I-Exponential Moving Medium (EMA) ibonisa isilinganiso samanani, ukubeka isisindo esiningi semathemikhali kumanani asanda kutholakala. Ukulinganisa okusetshenziselwa intengo yakamuva kuncike esikhathini esikhethiwe sesilinganiso esihambayo esikhethwe ngumsebenzisi. Isifinyezo isikhathi se-EMA, isisindo esengeziwe sisetshenziselwa intengo yakamuva kakhulu.
I-Cost Cost Index (ECI)
Isibonakaliso sezomnotho se-US esilinganisa izinga lokukhula kanye nokukhuphuka kwezindleko zomsebenzi.
Ukuphela kwe-Day Order (EOD)
Lokhu kuchazwa ngokuthi umyalelo wokuthenga, noma ukuthengisa ithuluzi lemali ngentengo ecacisiwe, umyalo uhlala uvulekile kuze kube sekupheleni kokuhweba.
Noma yiyiphi i-Market Market
Ichazwe njengesimo esenzeka emakethe ye-Euro Interbank deposit, lapho kokubili ibhidi kanye namanani okunikezwayo esikhathini esithile, zifana ncamashi.
Ukuthengiswa kwemali ye-Electronic
Izimali zokuhweba ngokusebenzisa ama-akhawunti e-brokerage online. Ukutheng Nemali rapportbwere older Wi-Fi ihlanganisa ukuguqulwa kwemali ekho页 emalini yangaphandle, ngesilinganiso sez Jayresheje Nemakethe. Ngolwazi lwezobuchwepheshe, liletha abathengi kanye nabathengisi ndawonye futhi besebenzisa i-platform yokuhweba nge-electronic yenza ama-market virtual indawo.
Lena yi-currency exchange eyodwa ye-European Union bloc.
Ibhange eliphakathi kwe-European Union.
I-European Currency Unit (ECU)
Ibhasikidi lezimali zelilunga le-EU.
Njengendlela yokuhlanganiswa phakathi kwamalungu e-European Union, kuhilela ukuhlanganiswa kwemigomo yezomnotho neyezimali, kanye nemali ejwayelekile 'i-euro.
Ichazwa njengesikhwama sokuhwebelana ngokushintshanisa esitshala imali ye-euro, ngokuqondile, noma ngendlela ye-euro eyayihlanganisa izinsimbi zezikweletu zesikhashana.
Leli yizinga lesithakazelo elicashunwe kwi-Euro currency esikhathini esithile.
I-Eurocurrency iyinkokhelo egcinwe ngaphandle kwemakethe yayo yasekhaya nguhulumeni kazwelonke noma izinkampani. Lokhu kusebenza kunoma iyiphi imali kanye namabhange kunoma yiliphi izwe. Isibonelo; Inqola yaseNingizimu Korea ehanjiswe ebhange eNingizimu Afrika, ibhekwa ngokuthi "i-eurocurrency". Eyaziwa nangokuthi "i-euromoney."
I-Eurodollars ichazwa ngokuthi isikhathi sokufaka imali esilinganisiwe emaRandi ase-US, emabhange angaphandle kwe-United States, ngakho-ke awekho ngaphansi kwegunya le-Federal Reserve. Ngenxa yalokho, lezo zimali zingaphansi komthethonqubo ongaphansi kunalokho, isibonelo, amadiphozi afanayo e-USA
I-European Union (EU) yiqembu lamazwe e-28 asebenza njengebhokisi lezomnotho nezombangazwe. Amazwe angu-19 manje asebenzisa i-euro njengemali yabo esemthethweni. I-Single Market YaseYurophu yasungulwa ngamazwe we-12 ku-1993, ukunamathela ekukhululeni kwenkululeko ezine; ukuhamba kwe: izimpahla, izinsizakalo, abantu kanye nemali.
Ama-Deposits angaphezu kweMargin
Imali efakwe ku-FXCC engasetshenziselwa umkhawulo ngokumelene nezikhundla ezivulekile ezikhona.
Mayelana nokushintshaniswa kwezimali, ukushintshaniswa ngokuvamile kuchazwa njengendawo yendawo lapho izinsimbi zithengiswa futhi zivame ukulawulwa. Izibonelo: i-New York Stock Exchange, i-Chicago Board of Trade.
Uhlelo olubekwe ohulumeni kanye namabhange asezindaweni ngenhloso yokulawula ukungena kanye nokuphuma kwamashishini angaphandle kanye namadivayisi, ukufaka: ukunikeza amalayisense amaningi, ama-quotas, amashadi, imikhawulo, izimali ezikhokhelwayo kanye nezinkampani ezingaphezulu.
Izindlela zokushintshaniswa kwemali umqondo wezinga elilinganiselwe lokushintshanisa imali lwemali-uhlelo ollanyelwe ukulawula izinga lokushintshanisa lwemali elihlobene nezinye zezimali. Kukhona ukuhluka kwezinga lokushintshanisa lwemali ngaphakathi kwemingcele yezimangalo. Inqubo yokushintshanisa ngemali ngokuvamile ibizwa ngokuthi uhlelo lwemali lwe-pegged.
Incazelo yokushintshaniswa kwamanye amazwe yohwebo elincane oluthengiswa futhi olutshintshaniswa. Izezimali ezingavamile azikho emthethweni futhi azikho ukuthuthukiswa kwemakethe, isibonelo, i-euro futhi ngakho-ke ithengiswa ngemikhiqizo ephansi kakhulu. Ukuhweba imali eyingqayizivele kungaba yabiza kakhulu njengoba izingcaphuno - ibhidi / ukucela kusakazeka, kuqhubeka njalo. Ama-exotics awadayiswa kalula (noma atholakalayo) kuma-akhawunti ajwayelekile wokuthengisa. Izibonelo zezimali zangaphandle zihlanganisa i-baht ye-Thai ne-dinar yase-Iraq.
Libhekisela engozini ehambisana nokuguquka emanani emakethe okungabangela inzuzo noma ukulahlekelwa okungenzeka.
Luwumbiko owenziwe yi-US Census Bureau enikeza imininingwane yezibalo zokukhiqiza zama-oda angapheli futhi aqinile nezinyathelo zokuthunyelwa, ama-oda angazalwanga, kanye nezinqolobane zabakhiqizi basekhaya.
Ukunyakaza okusheshayo kwamanani, noma amanani ezimakethe ezibangelwa ukungalingani kokunikezwa kwezidingo kanye nezidingo ezivela kubathengi kanye / noma abathengisi, bayaziwa futhi isimo lapho izimakethe zezimali zihlangabezana namazinga aphezulu okungazenzeki, okuhlanganiswa nokuhweba okungavamile. Ezimweni ezinjalo amazinga, noma amanani, angeke atholakale kalula kumaklayenti kuze kuqale kabusha imakethe ehlelekile.
Isamba semali yesigodi
Kuyinani lesithakazelo lapho inhlangano ephoqelelwe imali ibolekisa imali egcinwe e-Federal Reserve eya kwenye inhlangano eyimpoqo ubusuku bonke. Isetshenziselwa ukuqhuba inqubomgomo yezimali futhi ithinte izinguquko ekunikezeni imali okubangela ushintsho ezingeni lomsebenzi emnothweni wase-United States.
Izimali ze Fed
Izilinganiso zezimali ezigcinwe amabhange ngaphansi kolawulo lwe-Federal Reserve Bank.
Lesi yisifinyezo se-United States Federal Reserve Bank.
Ikhomishana ye-Federal Open Market
Eyaziwa nangokuthi i-FOMC. Lona ngumzimba wabantu abathile abanquma inkambo yenqubomgomo yezimali ezokwenziwa e-United States. I-FOMC inomthwalo wemfanelo ngokuqondile wokubheka isilinganiso sezimali sika-Federal kanye nesilinganiso sesaphulelo. Zombili amazinga anethonya ekulawuleni amazinga okukhula kwemali kanye namazinga ezomnotho e-United States.
I-Federal Reserve Ibhodi
Ibhodi le-Federal Reserve System, eliqokwe nguMengameli we-US ngomnyaka we-14, elinye lebhodi liphinde liqokwe iminyaka emine njengosihlalo.
I-Federal Reserve System
Uhlelo lwebhange oluyinhloko lase-USA, oluhlanganisa i-12 Federal Reserve Banks, elawula izifunda ze-12 ngaphansi kokulawulwa ngqo kweBhodi ye-Federal Reserve. Ubulungu be-Fed kuyimpoqo yamabhange ahlelwe yi-Controller of Currency kanye nokuzikhethela kumabhange ahlelwe nguhulumeni.
Leli gama elisetshenziselwa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe okubhekisela kumazinga okusekela kanye nokumelana ukulungiswa kungase kushaywe ngaphambi kokubuyela ekuqondeni kokunyakaza kwamanani amakhulu.
Gcwalisa, noma ugcwalise
Lesi yisivumelwano esenzelwe egameni / kwi-akhawunti yeklayenti ngenxa yomyalelo wamakhasimende. Uma usugcwalisiwe, lo myalelo awukwazi ukukhanselwa, ukuchitshiyelwa, noma ukukhishwa iklayenti.
Yinani lapho umyalelo weklayenti ohamba khona isikhathi eside noma omfushane ukwenziwa.
Lokhu kuchazwa njengengcaphuno yamanani, okulethwe ngokuphendula ngesicelo sezinga eliqinile, eliqinisekisa ibhidi noma licele intengo kuze kube semali ecashunwe. Kuyintengo lapho iqembu lokubamba iqhaza lizimisele ukukhipha isivumelwano, ukuze kulungiswe indawo.
Ukusetshenziswa kwentela kanye / noma ukuvuselela njengethuluzi, ekusebenziseni inqubomgomo yezimali.
Lezi yizinsuku zekhalenda zenyanga zonke ezifana nendawo. Kunezinto ezimbili ezihlukile. Ukuze uthole imininingwane eningiliziwe bheka ulwazi ngezinsuku zamanani.
I-Exchange Rate Fixed
Lona izinga elisemthethweni elibekwa abaphathi bezimali. Kuyinani lemali elibekwe ngokumelene nelinye lwemali noma zezimali.
Ichazwa njengendlela yokunquma amanani ngokusungula izinga elilinganisela abathengi kubathengisi. Le nqubo ivela kanye, noma kabili ngosuku ngezikhathi ezithile ezichazwe. Isetshenziswa ezinye zezimali, ikakhulukazi ekusunguleni izinga lokuvakasha.
Lungisa uHlelo Lokungena
I-Financial Information Exchange (FIX) protocol yasungulwa ku-1992 futhi iyinqubo yemilayezo eqhutshwa embonini yokushintshaniswa kolwazi oluhlobene nokuthengiswa kwemasheya kanye nezimakethe.
Izinga lokushintshanisa elishisayo
Ichazwa njengezinga lokushintshaniswa lapho intengo yemali isethwe ngamakethe emakethe eyakhiwe ekunikezeni kanye nesidingo esifanelana nezinye zezimali. Izimali ezikhukhula zihambisana nokungenelela yiziphathimandla zezimali. Uma umsebenzi onjalo uvame, i-float iyaziwa njengento engcolile.
I-Federal Open Market Committee, ikomidi ngaphakathi kwe-Federal Reserve System enamalungu e-12 abeka umgomo wezinqubomgomo zemali. Izimemezelo zikwazisa umphakathi mayelana nezinqumo ezenziwe ngezinga lentela.
Igama elithi "exchange exchange" lisho ukuhweba okuthengiswayo ngaphandle kwemali yangaphandle, ayikho into eyodwa, ephakathi, evunyelwe futhi eyaziwayo yokuhweba forex. Leli gama lingase libheke ekuhwebeni kwemali ngokuhwebelana okufana ne-IMM e-Chicago Mercantile Exchange.
Ukushintshaniswa Kokushintshaniswa Kwezwe
Ukuthengiswa okubandakanya ukuthenga kanye nokudayiswa kwezimali ezimbili ngesikhathi esisodwa ngesilinganiso esivunyelwe ngesikhathi sokuphela kwesivumelwano, owaziwa nangokuthi 'umlenze omfushane', ngosuku oluzayo esikhathini esizayo ngesilinganiso esivunyelwene ngaso isikhathi sesivumelwano - 'umlenze omude'.
"Forex" yigama elifingqiwe elitholakalayo lokushintshaniswa kwamanye amazwe futhi ngokuvamile libhekisela ekuhwebeni kokuhwebelana ngokushintshwa kwemali yangaphandle.
Isu lokuhweba elisetshenziselwa abahwebi be-forex bezama ukuhlukumeza umehluko emanani entengo yezinhlamvu zemali. Kuthatha inzuzo yokusabalalisa okuhlukahlukene okunikezwa ngumdayisi webhangqa elithile. Leli qhinga lihilela ukusabela ngokushesha ematheni.
Amahora emakethe ye-Forex
Ichazwe njengamahora lapho abahlanganyeli bezimakethe zangaphambili bangakwazi: ukuthenga, ukuthengisa, ukushintshanisa nokucabangela ngezimali. Imakethe ye-forex ivuliwe amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezinhlanu ngesonto. Izimakethe zezimali zihlanganisa: amabhange, izinkampani zentengiselwano, amabhange aphakathi, amafemu okuphatha utshalomali, ama-hedge funds, abathengisi be-forex nabathengisi. Imakethe yemali yamazwe ngamazwe ayikho ukushintshaniswa okuphakathi, kuhilela inethiwekhi yomhlaba wonke yokuhwebelana nabathengisi. Amahora okuhweba nge-forex asekelwe lapho ukuhweba kuvulwa ezweni ngalinye elibambe iqhaza. Lapho izimakethe ezinkulu zihamba; I-Asia, iYurophu nase-USA, ivolumu enkulu kakhulu yokuhweba kwenzeka.
Amaphuzu we-Forex Pivot
Lokhu kubhekisela kusethi yezinkomba, ezivame ukusetshenziselwa abadayisi bezinsuku ukuze zichazwe masinyane uma umqondo wemakethe ungashintsha kusuka ku-bullish kuya ku-bearish futhi ngokuphambene nalokho. Ngamanye amazwi, lisetshenziselwa ukunquma amazinga wokusekela nokumelana. Amaphuzu we-Forex pivot abalwa njengabaphakathi kwe: aphakeme, aphansi futhi avulekile (i-HLC), kusukela kusikhathi sokuhweba sosuku olwedlule.
Spread ukubheja okuhilela amabhethri ekuhambeni kwentengo yamabhuyari wezimali, ibhidi kanye nenani lokubuza.
Spread betting amafemu ahlinzeka ngemali yokusabalalisa ukukhishwa kwamanani amanani amabili, ibhidi kanye nenani lokubuza - ukusakaza. Abahwebi bebheja uma intengo yohlu lwemali lizobe liphansi kunani lebhizinisi, noma liphakeme kunani lokubuza.
Uhlelo lwekhompyutha lwe-software yokuhweba olusekelwe emasayini wokuhweba kwezobuchwepheshe, okusiza ukucacisa ukuthi ungangena yini ezohwebo ngenani elilodwa lwemali nganoma yisiphi isikhathi esithile. I-robot ye-Forex, ngokudayisa abadayisi ngokukhethekile, ihlale iwusizo ekususeni isici sengqondo sokuhweba.
Ukuhweba kwe-Forex System
Lokhu kuzochazwa ngokuthi ukuhweba okusekelwe ekuhlaziyweni ukuze kunqunywe ukuthi ukuthenga noma ukuthengisa umbhangqwana wemali ngesikhathi esithile, ngokuvamile ngokususelwa kwisethi yamasignali akhiqizwa ngamathuluzi okuhlela ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe, noma izenzakalo zezindaba ezibalulekile nedatha. Uhlelo lokuhweba ngokuhweba ngokuvamile lubunjwa ngamasignali ezobuchwepheshe abakha izinqumo zabo zokuthenga noma zokuthengisa, okwenza ngokusemthethweni kube nokuhweba okunenzuzo.
Ngezinye izikhathi lisetshenziswe njengenye indlela echaza 'ukubhekana phambili' noma 'ikusasa'. Ngokuqondile ukulungiselela amanani afanayo njengendlela yokubhekana phambili phakathi kwebhange nomthengi.
Amanani okuphambana acashunwe ngamaphuzu aphambili, abamele umehluko emkhatsini wezinga eliphambili namanani. Ukuze uthole izinga eliphambili, ngokuphambene nesilinganiso sokushintshanisa langempela, amaphoyinti okuphambili ayengezwa, noma asuswe kwisilinganiso sokushintshaniswa. Isiqunto sokukhipha noma ukwengeza amaphuzu sinqunywe umahluko phakathi kwamazinga ediphozi kokubili kwezimali ezihilelekile ekuthengiseni. I-currency base nezinga eliphezulu lesithakazelo liyancishiswa kwisilinganiso esenzansi senzalo esicatshangelwe emakethe ehamba phambili. Amaphoyinti okuhamba phambili asuswe kusuka esiteshini samanje. Isamba semali esenzansi esenzansi esincane sisezingeni eliphansi, amaphuzu angaphambili ahlanganisiwe esilinganisweni sendawo, ukuze athole izinga eliphambili.
Lezi yizici zezomnotho ezinkulu ezingeni lesifunda noma lesifundazwe, ezamukelwa njengokwenza isisekelo senani elilinganiselwe lemali, lezi zizobandakanya izici ezifana: ukwehla kwamandla emali, ukukhula, ukulingana kwezebhizinisi, ukulahlekelwa kukahulumeni, kanye nezinga lentela. Lezi zinto zithinta abantu abaningi kunabantu abambalwa abakhethiwe.
Indlela esetshenziselwa ukulinganisa inani eliyisisekelo lemali ethile esekelwe ezindabeni ezinkulu ezinkomba zezomnotho, izinqubomgomo zikahulumeni, nanoma imiphi imicimbi enomthelela ezweni lezwe.
Lesi yisigama sokushintshwa kwamanye amazwe, esetshenziswa kakhulu namuhla.
I-FXCC iyinhlangano yomhlaba wonke evunyelwe futhi ilawulwa ezikhundleni ezihlukahlukene, ezibandakanya izinhlangano ezimbili: FX Central Clearing Ltd kanye neCentral Clearing Ltd.
I-FXCC Demo Trading Platform
I-FXCC inikeza uhlelo lwe-demo yokuhweba yesikhulumi, okuyisichazamazwi esiphelele se-platform ye-FXCC yokuhweba yokuhweba kwangempela. I-platform yokuhweba ye-demo ivumela amaklayenti e-FXCC ukuthi azijwayele ukusebenza nokusebenza kwangempela kwezokuhweba yesikhulumi, ngaphandle kokufaka noma iyiphi inhloko ngokuqhuba amakhodi atholakalayo. Isiteji asibandakanyi amadili wangempela noma izinkontileka, ngakho-ke noma yimuphi inzuzo, noma ukulahlekelwa okukhiqizwa ngokusebenzisa isiteji kuyinqobo. Kuyinto kuphela ekuboniseni izinjongo kuphela.
Idokhumenti yokudalula ingozi yeFXCC
I-FXCC Risk Disclosure ichaza izingozi ezihilelekile lapho kusetshenziselwa ama-CFD kanye nokusiza iklayenti ekuthatheni izinqumo zokutshala izimali ngesisekelo.
Ichazwa njengezikhombisa ezihamba phambili ezimboni zezimboni yi: USA, Germany, Japan, France, UK, Canada nase-Italy.
Lona iG7 plus: Belgium, Netherlands naseSweden, iqembu elixhunyaniswe nezingxoxo ze-IMF. ISwitzerland ngezinye izikhathi (ngokulinganayo) ihilelekile.
Kufushane i-Great Britain Pound.
Ukuhamba isikhathi eside
Ichazwe njengesenzo sokuthenga pair pair. Ngokwesibonelo; uma iklayenti ithengile i-EUR / USD, beyobe 'behamba isikhathi eside' i-Euro.
Lesi yisenzo sokuthengisa idida yemali. Ngokwesibonelo; uma iklayenti ithengisa i-EUR / USD, 'yayizofinyeleka' i-Euro.
Lokhu kuchazwa ngokuthi uhlelo lwemali oluhleliwe, lapho uhulumeni kanye nebhange eliphakathi, elungiselela imali yabo engashintshwa ngokukhululekile ibe yigolide ngenxa yezinto zayo eziyisisekelo. It has ukusetshenziswa okungezona imali, ngakho kulindeleke ukuba ugcine ezingeni eliphansi isidingo sangempela. Iphinde ibhekisele kuzinhlelo zemali ezikhuphisana ngokukhululekile, lapho igolide, noma amaresidi ebhange egolide, isebenza njengesikhulu esiyinhloko sokushintshanisa.
Kuhle 'Kukhanseliwe (i-GTC oda)
Umyalelo wokuthenga noma ukuthengisa ngentengo ehleliwe eqhubekayo isebenza kuze kube yilapho ingenziwa noma ikhanseliwe ngumthengisi.
Liyigama elisetshenziswe ku-jargon elimele ama-dollar paper dollars.
Umkhiqizo Wasekhaya Omkhulu (GDP)
Ichazwe njengenani eliphelele lazo zonke izimpahla nezinsizakalo ezikhiqizwa ezweni esikhathini esithile.
Umkhiqizo Wezwe Omkhulu (i-GNP)
Kuyinani lezomnotho elilingana ne-GDP kanye nemali engenayo etholakalayo ekuphumeni, imali engenayo, noma imali yokutshala izimali ezitholwa phesheya.
QAPHELA: Okuhle kukhanseliwe.
Ikhandlela elibhekwa ngesikwele njengomzimba onomsindo omude kuya phansi.
Isibambo sichazwa njengenombolo yonke yenombolo yesilinganiso samanani, ukuqeda ama-decimals. Ezimakethe zezimali zangaphandle, isibambo siphinde sibheke engxenyeni yentengo ecashunwe ebonakala kokubili intengo yokubiza futhi inikeze ngentengo yemali. Ngokwesibonelo; uma i-EUR / USD pair pair ine-bid ye-1.0737 bese ibuza i-1.0740, isibambiso siyoba yi-1.07; isaphulelo esilingana naso kokubili ibhidi kanye nenani lokubuza. Kanti futhi okubizwa ngokuthi "isibalo esikhulu" isibambo sivame ukusetshenziswa njengombhalo ukuchaza izinga elivelele elizayo, isibonelo, i-DJIA esondela ku-20,000.
Imali enzima iyaziwa nangokuthi i-currency eqinile futhi iyinhlobo ebiza kakhulu yezimali ekuhwebeni kwamanye amazwe. Ziyizimali ezivunywa kabanzi emhlabeni wonke njengezinhlobo zokukhokha kwezimpahla namasevisi. Izimali ezinzima ngokuvamile zihlala zizinzile ngezikhathi ezincane futhi zithengisa kakhulu emakethe ye-forex. Izimali ezinzima zikhiqizwa ezizweni ezinezindawo eziqinile zomnotho nezombangazwe.
Amazwi ebhange eliphakathi uma lihlose ukwandisa izinga lentela, okungase libuyele emphumela omuhle ngemali.
Iphethini leshadi esetshenziselwa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe okuphakamisa ukuguqulwa kwesimo, isibonelo, kusukela ekuthuthukisweni kwesimo se-bearish kuya ku-trend trend.
Kuhilela ukuphathwa kwezikhundla ezide nezifushane zezimpahla ezifanayo.
I-Frequency Trading Trading (HFT)
Lena uhlobo lokuhweba kwe-algorithmic ne-volume enkulu yama-oda we-simultaneous, eyenziwa ngesivinini esisheshayo kakhulu.
Okuphezulu / Okuphansi
Intengo edayiswa kakhulu kunazo zonke noma intengo ephansi kunazo zonke ezithengiswayo ngensimbi engaphansi kwesuku lokuhweba lwamanje.
Leli gama elisetshenziselwa ukuchaza isenzo somdayisi wombhangqa wemali, lapho uthengisa emkhakheni wokubizela emakethe.
Lesi yisifinyezo semali seDola laseHong Kong (HKD), imali yaseHong Kong. Yakhiwe ngamasenti angu-100, evame ukumelelwa uphawu lwe $, noma i-HK $. Incwadi emithathu yaseShayina ekhishwa ngamabhange inamandla okukhipha i-Hong Kong dollar, ngaphansi kwenqubomgomo kahulumeni waseHong Kong. I-HK $ idlulisela esikhwameni sokushintshanisa kukahulumeni esibambe amadola ase-US ekugcineni.
Ngokuphathelene nokuhweba kwemali, lokhu kuchazwa njengomthengi womunye wemali.
Izikhombisi zeMakethe Yezindlu
Izinkomba zezomnotho ezithinta izimakethe eziphathelene nezindlu, ikakhulukazi eU.SA nase-UK, ngokusekelwe kwidatha yezindlu eshicilelwe.
Lona inani lamaphrojekthi wokwakha omusha (izindlu ezizimele) ezaqala phakathi nesikhathi esinikeziwe, ngokuvamile sicashunwe ngenyanga noma ngonyaka.
I-Ichimoku yenzelwe ngaphambi kweMpi Yezwe II, njengesimodeli sokubikezela izimakethe zezezimali, isenzo esilandelayo esilandelayo esiqaphela amaphuzu aphakathi kwamaphesenti omlando futhi ihlehla phezu kwamaphuzu ahlukahlukene. Inhloso yalesi sibonakaliso ukudala izimpawu zokuhweba ezifana nalokho ezenziwe ngokuhamba ngezindawo, noma ngokuhlanganiswa kwe-MACD. Imigqa yezinhlamvu ze-Ichimoku idluliselwa phambili ngesikhathi, idala ukwesekwa okubanzi futhi izindawo zokumelana, okungenzeka lokhu kunciphisa ingozi yokuphulwa kwamanga.
I-International Monetary Fund eyasungulwa ku-1946 ukuze inikeze ngemali mboleko yamazwe ngamazwe amancane naphakathi.
Kuyinani elibangelwa umehluko phakathi kwesilinganiso sebala kanye nesilinganiso esizayo ngokuthengiselana.
Imali engenxa yemithethonqubo yokushintshaniswa kwamanye amazwe noma izithiyo ezingokwenyama ayikwazi ukushintshaniswa kwenye imali. Izimali ezingenakuphikiswa zingagcinwa ekuhwebeni, ngenxa yokungazwakali okukhulu, noma izigwegwe zezombusazwe.
Ukucaphuna okungaqondile kungukuthi i-USD iyinani lemali eliyisisekelo le-pair hhayi imali yemali. Njengoba i-USD iyinkokhelo ephezulu emakethe yokushintshanisa amazwe angaphandle, ngokuvamile isetshenziselwa imali yasebhange kanye nezinye zezimali, isibonelo iJapan yaseJapan noma iDolada yaseCanada isetshenziselwa imali ye-counter.
I-Industrial Production Index (i-IPI)
Isibonakaliso sezomnotho esenza imisebenzi yamakethe. Ishicilelwa yiBeral Reserve Board yase-USA njalo ngenyanga futhi lilinganisa ukukhiqizwa kwemayini, ukukhiqiza, kanye nezinsiza.
Ichazwe njengokunyuka kwentengo yempahla yabathengi, ngokuqondile ehlobene nokunciphisa amandla okuthenga.
Isidingo sokuqala samaMargin
Lokhu kuchazwa ngokuthi ibhalansi elincane lemali edingekayo, ukuze kutholakale isikhundla esisha esivulekile, lapho umkhawulo wokuqala kufanele ube ngaphansi noma ulingane nomkhawulo okhona. Isidingo semali yokuqala sokuqala singaboniswa njengephesenti (isibonelo; i-1% yemali ye-dollar yase-US), noma ingabalwa ngesilinganiso sokulinganisela.
Imakethe ye-interbank ichazwa njengengaphezu kwemakethe yamasheya yabathengisi, ku-FX ukuhweba babeyokwenza ukwakha izimakethe ekushintsheni kwamanye amazwe komunye nomunye.
Amazinga okushintshaniswa kwamanye amazwe acashunwe phakathi kwamabhange angaphandle
I-Inter Dealer Broker
Lena yinkampani yokuhweba esebenza ezimakethe (noma ezakhiweni ze-OTC), esebenza njengabalamuleli phakathi kwabathengisi abakhulu nabathengisi bokuhweba phakathi. Ngokwesibonelo; amalungu eLondon Stock Exchange, avunyelwe ukubhekana nabenzi bemakethe, ngokumelene nomphakathi jikelele.
Inani elikhokhiswe ukusebenzisa imali. Izithakazelo zenzalo zithonywe amazinga asethwe yiFed.
Isilinganiso sezinga lesithakazelo
Ngenxa yalesi simo, isilinganiso sezinga lesithakazelo kanye nokwahlukana phakathi kwezinga lokushintshanisa phambili nangamabala phakathi kwezifunda ezimbili lilingana. Isilinganiso sezinga lesithakazelo sixhuma: amanani ezithakazelo, amazinga okushintshaniswa kwamabala kanye namanani okushintshaniswa kwamanye amazwe.
Kuyinto isenzo esiyinhloko esithinta ukubaluleka kwemali yayo, ngokuthengisa noma ukuthenga imali yangaphandle ukushintshanisa owakhe wekhaya, njengomzamo wokuthonya izinga lokushintshaniswa.
Kuthathwe njengezikhundla eziqhutshwa ngumthengi we-FXCC ngosuku. Ngokuvamise ukwelekezwe ngokuvala.
Kuthiwa njengomuntu, noma inhlangano esemthethweni eyethula amakhasimende ku-FXCC, ngokuvamile ngokubuyisela isinxephezelo ngokwemali ngokuthengiselana. Abethuli bavinjelwe ukwamukela izimali ezibekwe eceleni kusuka kumakhasimende abo.
Ichazwa njengento eyenza iqembu lezimali ligcine ubuhlobo obuhleliwe buhambisana nomunye nomunye, lapho izimali zabo zihamba ngokuhambisana nenye enye imali enemibandela yezimo zokunikezela nezidingo emakethe yokushintshanisa. Amabhange amakhulu ahlanganyela kulo mvumelwane agcina ukuhamba okuhlangene ngokuthenga nokuthengisa izimali zomunye nomunye.
Lesi yisifinyezo semali ye yen Japanese (JPY), imali yeJapane. I-yen ihlanganisa i-100 sen, noma i-1000 rin. I-Yen ivame ukumelelwa (njengophawu) yinhlamvu eyinhloko Y, ngemigqa emibili enezingqimba phakathi nendawo.
Ichazwa njengemali esetshenziselwa ukubhekisela kokuthengiselana ngamazwe kanye nokubeka amazinga wokushintshaniswa. Amabhange aseMelika agcina izimali eziyinhloko ezigcinwe futhi i-dollar yase-US ibonakala njengemali ebalulekile kakhulu emhlabeni.
I-Keltner Channel (KC)
Isiteshi seKeltner sakhiwe futhi sidalwe ku-1960 nguChester W. Keltner futhi siboniswe encwadini yakhe ethi "Indlela Yokwenza Imali Ezimpahla". I-Keltner Iziteshi zihlela imigqa emithathu, ehlanganisa: isilinganiso esihambayo esilula, esinamaqembu angenhla nangaphansi ahlelwe ngenhla nangaphansi kwalesi silinganiso esihambayo. Ububanzi bezinsimbi (ukudala isiteshi), kusekelwe kwisici esishintshiwe somsebenzisi esisetshenziswe ku-Range Value Range. Lo mphumela ungeziwe futhi ususwe kusuka kumgqa wokulinganisa ophakathi.
Slang for the dollar yaseNew Zealand.
Yazi iKhasimende Yakho, lokhu kuyinkambiso yokuhambisana nokulandela amafemu okuthengisa njengeFXCC.
Izinkomba ezihamba phambili nezinqamulelayo
Cishe zonke izinkomba zobuchwepheshe (uma kungenjalo) zilahla, aziholeli; abahlinzeki ubufakazi bokuthi, ngokwesibonelo, i pair pair lwemali izoziphatha ngendlela ethile. Okunye ukuhlaziywa okuyisisekelo kungaholela, uma kunikezwa ukuthi kungabonakaliswa phambili kwezenzakalo. Ucwaningo lwabathengi abathenga imikhuba esikhathini esizayo lungabonisa impilo yomkhakha wokudayisa. Ucwaningo lwenhlangano yokwakha izindlu lunganikeza ubufakazi bamalungu abo azinikele ekwakheni amakhaya amaningi. Ucwaningo lwe-CBOT lubonisa ukuthi abathengisi bokuzibophezela benze ukuthenga nokuhweba izinsimbi ezithile.
Kuthengisa imali esicatshangelwe, owaziwa nangokuthi uthatha intengo yokubiza yesilinganiso.
Inani lenkokhelo yezwe, eyaziwa ngumthetho njengendlela yokukhokha esemthethweni. Imali kazwelonke ibhekwa njengethenda eligunyaziwe emazweni amaningi, futhi isetshenziselwa ukukhokha isikweletu semfihlo noma somphakathi, kanye nokuhlangabezana nezibophezelo zezezimali. Umbolekisi unesibopho sokwamukela ithenda yezomthetho ekubuyiselweni kwesikweletu. Ithenda lezomthetho ikhishwa ngumzimba kazwelonke ogunyaziwe, njenge-Treasury yase-United States e-United States naseBhange laseNgilandi e-UK.
Lokhu kungukulawulwa kwesimo esikhulu se-notional, ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwemali encane yenhloko.
Isibopho yisibopho sokuletha inani lemali ngosuku olubekiwe esikhathini esizayo kumuntu osebenza naye.
I-London Inter-Bank Isilinganiso Esihlinzekwayo.
I-oda elinqunyiwe lingasetshenziswa ukubeka ukuhweba ukungena emakethe ngenani elichazwe ngaphambilini. Uma intengo yemakethe ifinyelela intengo engaphambi kokusetha, umyalo ungase ukhanyiswe (umyalelo wokukhawulela awuqinisekisi ukuthi umyalelo uzokwenziwa) kumanani omkhawulo ochazwe. Kungenzeka, ngenxa yokungazithembi emakethe ukuthi imakethe ifinyelela intengo elinganiselwe futhi ngokushesha ibuyela emuva kusuka kumkhawulo wamanani omkhawulo, nge-volume encane kakhulu ehwebayo. Khona-ke, umyalo wokukhawulela angeke ususwe futhi uzohlala usebenza kuze kube yilapho ungakwenziwa noma kuze kube yilapho iklayenti ikhansela umyalelo ngokuzithandela.
Lona intengo iklayenti ecacisa lapho ubeka umyalo wokukhawulela.
Ishadi elilula lomugqa lixhuma amanani angashadile isikhathi esithile esikhethiwe.
Lona isimo emakethe lapho kunenani elilinganayo levolumu elithengiswayo, ukuze lithenge kalula, noma lithengise izinsimbi ngokuvamile (noma eduze) namanani acatshangelwe.
Ichazwe njengento yokuthengiselana okuphazamisayo, noma ivala isikhundla esasungulwe ngaphambilini.
Uma i-akhawunti yomthengi ingenayo imali eyanele yokubamba izikhundla ezivuliwe, ukukhishwa kwezimali kuzokwenzeka ngokuya kwizinga elithile le-akhawunti elizokhipha izikhundla ezivuliwe ngentengo engcono kakhulu etholakalayo ngesikhathi esinikeziwe. Iklayenti ingavimbela ukukhipha i-akhawunti yabo kanye nezikhundla ngokufaka umkhawulo owengeziwe ku-akhawunti, noma ngokuvala isikhundla esivele sikhona.
Leli gama elisetshenziselwa ukuchaza inani levolumu elitholakalayo ukuthenga, noma ukuthengisa ngezinga ngesikhathi.
I-London Spot Fix
Ngenxa yenkomfa yenkomfa yaseLondon Gold Pool (Scotia-Mocatta, Deutsche Bank, Barclays Capital, Societe Generale neHSBC), intengo ngayinye yamatshe ayigugu, njengegolide, isiliva, i-platinum ne-palladium isethwe nsuku zonke isisekelo ku-10: I-30 (iLondon ilungisa) ne-15: i-00 GMT (i-London pm fix). I-London spot fix price ibhekwa njengezinzile uma ucingo lwenkomfa luphela.
Lapho iklayenti ivuleka isikhundla esisha sokuthenga i-pair pair, kubhekwa ukuthi uhambe 'isikhathi eside'.
Umthengisi kanye ne-slang term ye pair USD / CAD currency currency.
Ichazwe njengeyunithi esetshenziselwa ukulinganisa ukubaluleka kokuthengiselana. Ukuthengiselana kubhekiswa ngenani lezinto ezithengiswayo, kunokubaluleka kwezimali. Kuyinto yebhizinisi elijwayelekile lokuhweba elibhekisela kumyalelo we-unit 100,000.
I-MACD, Ukuhambisa isilinganiso se-Convergence ne-Divergence
Kuyinkomba ekhombisa ukuxhuma phakathi kwamabili amazinga ahambayo nokuthi asebenzisana kanjani uma inani lishintsha. Kuyinto elandelayo inkomba yokubonisa.
Leli lizinga eliphansi kunazo zonke elidingekayo, okuyinto iklayenti okufanele ibe nayo ku-FXCC, ukuze uhlale uvulekile, noma ugcine isikhundla esivulekile.
Amabili amabili afaka emabhuyiseni wezimali ezithengiswa kakhulu emakethe ye-forex, njenge-EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF. Lezi zibhangqa ezinkulu zemali ziqhuba imakethe yomhlaba wonke, ama-USD / CAD ne-AUD / USD angabhekwa njengama-majors, nakuba lezi zibili zibizwa ngokuthi "amanani wezimpahla".
Yikho konke okukhiphayo emkhakheni wokukhiqiza wezibalo zokukhiqiza izakhamuzi.
Yigama elisetshenziswe lapho umphathi wemali eyokwenza imali yokuhweba kwi-akhawunti yabathengi ngendlela efanayo yokuqasha umeluleki wezokutshala izimali, ukuze aphathe i-akhawunti yokutshalwa kwezimali, isibonelo, ukulingana.
I-Margin Call yenzeka uma izinga lamaklayenti lala maklayenti liyehla ku-100% njengoba lisethiwe ngu-FXCC. Iklayenti inenketho yokwengeza imali eyengeziwe ukuze uhlangabezane nezidingo zomkhawulo futhi ugweme i-Stop Out noma ungavimbela ukuhweba okuncane okungenzuzo.
Lokhu kuchazwa njengengqikithi yenani lamakhasimende elibophezelwe ngokumelene nezikhundla ezivulekile ezihlangene.
Umkhawulo kanye nokuphakanyiswa kuyaxhunyaniswa. Ngokufanayo, ukwehla okuphansi, kuphakamisa umkhawulo
Kudingeka ukugcina isikhundla esivuliwe futhi ngokuphambene nalokho. Kuvezwe ngokwezibalo; umkhawulo = isikhundla esivulekile / isilinganiso esiphakeme sokubheka ukuhweba. Ngokwesibonelo; Isikhundla se-USD / CHF 100,000 USD esilinganisweni sokulinganisela sokuhweba kwe-100: 1, izodinga imakethe efungelwe efana no-100,000 / 100 noma i-$ 1,000. Ukuze ubale amakhemikhali ukuze uthole ama-pair of currency, lapho i-USD engeyona imali yokuqala (isib. EUR / USD, GBP / USD) kanye neziphambano (EUR / JPY, GBP / JPY), futhi inani lemali yokulingana lizoguqulwa libe ngu-USD, ngokusebenzisa isilinganiso samazinga wokushintshanisa. Isibonelo; uma ikhasimende lithenga i-1 lot ye-EUR / USD, uma intengo i-1.0600. Ngakho-ke, i-100,000 EUR ilingana ne-100,600 USD. $ 100,600 / 100 isilinganiso isilinganiso = $ 1,006.00
Leli gama lisetshenziselwa isikhathi esithile sosuku lapho imakethe ivaliwe, okungukuthi i-5 PM EST ngoLwesihlanu ukuze kutholakale abadayisi be-forex.
Kubonisa ukuthenga / ukuthengisa ama-oda emakethe yensimbi ethile.
Ngokujwayelekile esetshenziswa yi-STP kanye ne-ECN brokerages, lokhu kuyindlela yokwenza lapho umthengisi engaqinisekisiwe ukuthola intengo ekhonjiwe esikrinini se-terminal, kodwa kuqinisekisiwe ukuthi uthole ukuhweba. Azikho izingcaphuno zokuphinda kabusha ngalolu hlobo lokukhishwa.
Umenzi wemakethe uchazwa njengomuntu, noma eqinile ogunyaziwe ukwakha nokugcina imakethe ensimbi.
I-oda lemakethe ithathwa njengomyalelo wokuthenga, noma ukuthengisa ibhangqa lemali ekhethiwe, kumanani wamakethe yamanje. Amakhodi emakethe athathwa ngentengo eboniswa ngesikhathi umsebenzisi echofoza inkinobho ethi 'BUY / SELL'.
Yingcaphuno yamanje yamabhangqa emali yohlu lwemali oyedwa ongashintshaniswa omunye ngesikhathi sangempela.
Libhekisela engozini engase ivele emakethe emakethe, isibonelo, ukuhlinzeka nokufuna, okuyinto ngenxa yalokho kubangela ukuthi inani lokutshalwa kwezimali liguquke.
Leli gama elisetshenziselwa ukubonisa ubuhlobo bokulingana okuphelele, okuhambisana nokulingana kwamahhala.
Ichazwe njengosuku lokukhokhela ukuthengiselana okunqunyiwe ngesikhathi sokungena ngemvume.
Ukulinganiswa okuphezulu kokuhweba kokuhweba
Isilinganiso siboniswa njenge-isilinganiso, esitholakalayo ukuvula isikhundla esisha. Ivumela abathengisi ukuthi bangene emakethe ngemakethe evolumu ephakeme kunokuba idiphozi yokuqala ingavumela. Ngokwesibonelo; isilinganiso senani le-100: I-1 ivumela iklayenti ukuthi ikwazi ukulawula isikhundla se-$ 100,000, ne-$ 1,000 yemakethe ($ 100,000 / 100 = $ 1,000).
Yisayizi encane yenkontileka yezinkontileka ekuthengiseni i-Forex elingana namayunithi we-1,000 wezimali zemali.
Izinkampani ezincane zenza abahwebi abasemsebenzini bakwazi ukuhweba ngezinyathelo ezincane futhi ngaleyo ndlela bancishise ingozi kakhulu.
Ku-akhawunti encane, amaklayenti akwazi ukuhweba izinkampani ezincane, ngakho-ke lolu hlobo lwe-akhawunti luvame ukuthandwa phakathi kwabathengisi besikhombisi lapho bengakwazi khona ukudayisa amanani amancane.
I-akhawunti ye-Forex Mini
Lolu hlobo lwe-akhawunti lwenza abathengisi bangene emakethe ngezikhundla ze-1 / 10 ubukhulu be-standard standard.
Inani elincane linenani lobukhulu lokuthengisa lwemali ye-0.10, lapho inani lepipi elilodwa elisekelwe ku-USD lilingana ne-$ 1.
Amabhanki amancane wezezimali
Ama-pair of currency pair, noma "abancane" aqukethe ezinye eziningi pair currency kanye currencies cross. Isibonelo, sizobeka i-Euro ngokumelene nekhadi lase-UK (EUR / GBP) njengombhangqwana wezezimali ezincane, naphezu kokuthengiswa kakhulu futhi ukusakazeka kube njalo. I-dollar yaseNew Zealand ehambisana ne-US Dollar (NZD / USD) ingahle ibekwe njengesibili sokwabelana ngemali, naphezu kokubekwa ngokuthi "idayisi lezimpahla".
Kuyindlela yokuhweba evumela ukuthi abatshalizimali 'babonise ukuhweba' abanye abathengisi be-forex nabatshalizimali. Babezokopisha ngokucophelela ukuhweba kwamanye abatshalizimali okuzobonisa ukuthi ku-akhawunti yabo yokuhweba.
Inyanga nenyanga. Ukusetshenziswa okusetshenziselwa ukubala ukushintsha kwamaphesenti ezinkampanini phakathi nenyanga.
Leli gama lisetshenziswe lapho umthengisi ehlola isiqondiso sesikhathi esifushane sokunyakaza kwamanani, hhayi okuyisisekelo. Isu sisekelwe kuphela ekujuleni.
IHedge leMali yeMakethe
Uhla lwezimakethe zemali kuyindlela yokuvikela ukungahambisani kwemali futhi ivumela inkampani ukunciphisa ingozi yemali lapho yenza ibhizinisi nenkampani yangaphandle. Ngaphambi kokwenza ukuthengiselana, ukubaluleka kwenkampani yenkampani yangaphandle kuyovalwa, ukuze kuqinisekiswe izindleko zokuthengiswa kwekusasa futhi kuqinisekiswe ukuthi inkampani yasekhaya izoba nenani elikwaziyo futhi elizimisele ukukhokha.
Ukuhambisa Isilinganiso (MA)
Ichazwe njengendlela yokwehlisa idatha yamanani / isilinganiso ngokuthatha intengo ejwayelekile yedatha yamagugu wedatha.
Lokhu kwenzeka uma kunamakhemikhali aphansi emakethe kodwa ukususwa okukhulu kwamanani nokusabalala okuphezulu. Emakethe emincane ngokuvamile kunenombolo ephansi yebhizinisi / ukucela okunikezwayo.
Ichazwa njengentshisekelo engalungile ye-SWAP) ehamba phezu kwesimo ebusuku.
Ezakhiweni zephethini zeshadi, isisekelo seNhloko ne-Ehlombe noma okuphambene nayo.
Ukuhluka kweNtela yeNzalo
Lona umehluko emazingeni ezithakazelo avela emazweni eemali ezimbili ezihlukahlukene. Isibonelo, uma umthengisi esinde ku-EUR / USD, ube ne-Euro futhi uboleka imali yase-US. Uma izinga elilandelayo le-Euro lingu-3.25% futhi isilinganiso sendawo / esilandelayo e-US ngu-1.75%, khona-ke umehluko wesithakazelo ngu-1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).
Ichazwe njengendlela yokulungisa, lapho kuphela ukungezwani kwezezimali ezithengiswayo kuxazululwa ekupheleni.
Isikhundla esiphezulu yinani elithengiwe noma elidayiswayo elingalingani nesikhundla sobukhulu obulinganayo.
Ichazwa njengezimpahla ezingekho ngaphansi kwemali. Kungabuye kuthiwe njengezimpahla ezingenayo.
I-New York Session
Isikhathi sokuhweba phakathi kwe-8: 00 AM EST '5: 00 PM EST. (Isikhathi saseNew York).
Kuthiwa njengefomethi yedatha esetshenziselwa amaphuzu okuhweba okuhlinzeka abasebenzisi ngokuqukethwe okuvuselelwe njalo.
Ayikho Idokhumenti Yokudonsa (NDD)
I-FXCC "ayikho idesksi yokuphatha" i-forex broker. I-NDD ichazwa njengokungavinjelwa kwemakethe ye-interbank, lapho izimali zakwamanye amazwe zithengiswa khona. Abathengisi be-Forex basebenzisa le miyalo yomzila oyimodeli ngokuya emakethe abahlinzeka ngempahla yezimali, kunokuba babhekane nomhlinzeki oyedwa wokuthengiswa kwempahla. I-oda lomthengisi linikwe abahlinzeki abaningi, ukuze bathole ibhidi lokuncintisana kakhulu futhi babuze amanani.
Leli gama elisetshenziselwa ukucacisa ukunyakaza kwamanani athile okungenakuchazwa ngezici eziyisisekelo noma zobuchwepheshe.
Idatha yesitatimende eqoqwe yi-US Bureau of Labor Statistics, ehambisana nedatha yokukhokhela iningi lama-United States. Akubandakanyi: abasebenzi basepulazini, abasebenzi bezindlu zangasese, noma abasebenzi abangenasenzuzo. Kuyinto inkomba eyisisekelo ekhishwe njalo ngenyanga.
Inani lama-notional ngensimbi yezezimali kubaluleka kwesimo emaqenjini e-dollar.
Isifinyezo seDola laseNew Zealand kanye ne-US dollar currency pair. Iveza kubathengisi ukuthi inani lamadola ase-US adingekayo kodwa enye idola laseNew Zealand. Ukuhweba i-NZD / USD pair currency ngokuvamile ibizwa ngokuthi "ukudayisa i-Kiwi".
Uhlobo lokuhleleka lapho ukuma nokukhawulela khona umyalelo kuhlelwa ngesikhathi esifanayo futhi uma ngabe ukuhweba kubulawa, elinye lizokhanselwa.
Lena yindleko lapho umthengisi efuna ukuthengisa imali. Ukunikezwa okubizwa nangokuthi intengo yokubuza.
Isimo esingase senzeke emakethe ye-forex, okuvame ukuba yesikhashana futhi imele ukuthi kwenzeke lapho inani labahwebi abathengisa ithuluzi lidlula inani labadayisi abazimisele ukuthenga.
Lena yohwebo ekhonza ukususa, noma ukunciphisa ezinye, noma yonke ingozi yemakethe endaweni evulekile.
Indoda endala yeTlineneedle Street, igama lebhange eliphakathi laseNgilandi.
I-akhawunti phakathi kwabathengi ababili lapho ama-akhawunti ngabanye kanye nokuthengiselana kuhlanganiswa ku-akhawunti ye-omnibus, kunokuba kubekwe eceleni. Umthengisi wekusasa uzovula le akhawunti ngenye inkampani, lapho ukuqhutshwa kwamadili nokusebenza egameni lomnikazi we-akhawunti kwenziwa.
Ukushintshaniswa Kwezimali Kwe-Inthanethi
Ichazwe njengendlela ye-intanethi evumela ukushintshaniswa kwezimali zezwe. Imakethe ye-forex ihlonishwa futhi iyinethiwekhi yamakhompyutha axhuma amabhange, ukuhwebelana kwemali ye-intanethi kanye nabathengisi be-forex abavumela ukulethwa kwezimali ezithengiswayo.
Ukuzama ukunciphisa imakethe, ngentengo yamakethe yamanje.
Yonke inani lezinkontileka ezingavunyelwe ezithathwe ngabahlanganyeli bemakethe ekupheleni kwansuku zonke zokuhweba.
Ichazwa njengemyalelo ozokwenziwa uma imakethe ishukumisela futhi ifinyelele intengo echazwe.
Noma yisiphi isikhundla esivulwe ngumthengisi ongakavaliwe ngokulingana okulinganayo noma okuphambene nesayizi ofanayo.
Vula ifasitela le-Position
Iwindi le-FXCC elibonisa zonke izikhundla zamaklayenti zamanje ezivulekile.
Ama-oda achazwa njengemyalelo evela kumakhasimende ukuze athenge noma athengise ipeni elilodwa lwemali, ngokusebenzisa i-platform ye-FXCC yokuhweba. Amakhodi angasethwa ukuba avuselelwe futhi, uma intengo yemakethe ifinyelela intengo yenkampani yangaphambi kokunqunywa.
Ukushintshaniswa kwe-OTC okubanjelwe kwangaphandle
Ngaphansi kwe-counter (ukuvala ukushintshwa) izimakethe zezimali zangaphandle, lapho abahlanganyeli bemakethe, njenge-FXCC kanye neklayenti, bangena ezivumelwaneni ezixoxwa ngasese, noma ezinye izinto ezithintana ngokuqondile komunye nomunye, lapho umkhawulo ogcinwe khona futhi ufakwe ngaphansi kwezikhundla ezivelele.
Isimo lapho izwe likhula kahle ngokwezomnotho ngokuhamba kwesikhathi eside, okwenza kube nesidingo esikhulu sokukhula esingakwazi ukusekelwa ngomthamo okhiqizayo kungabhekana nomnotho onamandla, okuvame ukuholela ekukhuleni izinga lentengo kanye nokwehla kwemali ephezulu.
Isikhathi sokulala ebusuku
Ichazwe njengesivumelwano kusukela namuhla kuze kube usuku olulandelayo lebhizinisi.
Ubuhle buba khona lapho inani lentengo lifanisa intengo yenye impahla, isibonelo; uma i-euro eyodwa ilingana nedola elilodwa lase-US. Umqondo "wamanani omphakathi" usetshenziselwa ukugcina izimpahla kanye nempahla, uma izimpahla ezimbili zinenani elilinganayo. Abahwebi bezinkontileka eziguqulwayo kanye nabatshalizimali bangasebenzisa umqondo wamanani wemvelo, ukuze banqume ukuthi kunenzuzo yini ukuguqula isibopho kuma-equities.
I-pip ichazwa ngokuthi ukuhamba kwentengo encane kunazo zonke ezenzelwe izinga lokushintshaniswa, ngokusekelwe emhlanganweni wamakethe. Iningi lemibhangqwana elikhulu lwemali lithengiswa ezindaweni ezine zamadesimali, ushintsho oluncane kakhulu lwalolu phuzu lokugcina lesimingcele. Kwamaqembu amaningi, lokhu kufana ne-1 / 100 ye-1%, noma enye iphuzu eliyisisekelo.
Ukubaluleka kwephayiphi ngayinye ekuhwebeni okunikeziwe, okuguqulwa ibe yi-akhawunti ye-akhawunti yomthengisi.
I-Pip value = (isilinganiso esisodwa se-pip / exchange exchange).
Lokhu kubhekwa njengama-oda angaxhunyiwe okwamanje asalindile futhi alinde ukubulawa, ngentengo enqunywe iklayenti.
Ukuvezwa kwezinguquko kumgomo kahulumeni ongase ube nomphumela ophikisayo esimweni somtshali.
Ukunyuka okuncane okungenani noma ukwanda okuncane kunani lokunyakaza.
Ichazwe njengezibophezelo eziphelele ezinqunyiwe ngemali enikeziwe. Isikhundla singaba flat, noma isikwele (akukho ukuchayeka), eside, (ngaphezulu imali athengwe kunathengiswa), noma short (ngaphezulu imali ezithengiswa kunalokho wathengwa).
Inzuzo ye-Net positive (SWAP) yokugcina isikhundla evuliwe ubusuku bonke.
I-Pound Sterling (Ikhebula)
Ezinye izikhombisi zephasi le-GBP / USD.
Intengo lapho imali noma imali ephansi ingathengiswa noma ithengwe.
Isiteshi samanani sakhiwa ngokubeka imigqa emibili efana neshadi lensimbi oyifunayo. Kuncike ekuhambeni kwemakethe, umzila ungakhuphuka, wehla noma ungene. Imigqa isetshenziselwa ukuxhuma ama-high and the lows, lapho umugqa ophezulu umelela izinga lokuphikisa futhi umugqa ophansi ubonisa izinga lokusekela.
Lona ukugeleza kwedatha yemakethe (isikhathi sangempela, noma ukubambezeleka).
Ibonisa izingcaphuno zemakethe ukuthi wonke umhlanganyeli wemakethe unokufinyelela okulinganayo.
Kubhekwa njengokunyakaza okuqhubekayo kwamanani ngendlela ethile.
Isilinganiso esetshenziselwa ukubala amanani okuboleka ngamabhange ase-US.
I-PPI inquma ukuthi inani lentengo lishintsha kwizinga eligcwele lebhasikidi elinqunyiwe lemali, liqashisa umthengi ukukhiqizwa okuhle okwenziwa ngabakhiqizi, futhi yenza njengendlela yokushintsha izinguquko zamanani okuthengisa.
Ukuvalwa noma ukukhipha isimo sokuthola inzuzo.
I-Purchasing Managers Index (PMI)
Isibonakaliso sezomnotho esilinganisa amandla omnotho emkhakheni wokukhiqiza. Ngokuqoqa izinhlolo zenyanga zonke. Abaphathi be-300 abathengi, inikeza ulwazi ngemibandela yebhizinisi futhi benza njengethuluzi lokwenza izinqumo kubaphathi.
PSAR, Stop Stop and Reverse (SAR)
Kuyinto inkomba esetshenziselwa ukuchaza ukuhamba okulandelanayo izikhundla ezimfushane nezide. I-SAR iyindlela yokulandela elandelayo.
Ikota-ngekota. Ukusetshenziswa okusetshenziselwa ukubala ukushintsha kwamaphesenti ezinkampanini ezihlukahlukene.
Yinqubomgomo yemali esetshenziswa yiCentral Bank ukunciphisa amanani entandokazi nokukhulisa imali ngokuthenga izibambiso ezivela emakethe. Le nqubo ihlose ukukhulisa ngokuqondile ukusetshenziswa kwezimali ezizimele emnothweni nokubuyisela ukukhuphuka kwemali okumele kuqondwe.
Iqukethe i-bid kanye ne-ask for a pair currency.
Njengoba ukuhweba i-Forex kuhilela ama-currency pair, i-quote currency imelela imali yesibili ku-pair.
Ngokwesibonelo; nge-EUR / GBP, i-pound yase-UK iyi-currency quote kanti i-euro iyinani lemali ephansi. Ezingcaphuno eziqondile, imali esicatshangelwe njalo iwuhlobo lwangaphandle. Ngama-quotes angacacile, imali yokucaphuna njalo iwuhlobo lwemali yasekhaya.
Kuyinkathi eqhubekayo yokwanda kwentengo yefa.
Ububanzi bungachazwa ngokuthi umehluko phakathi kwentengo ephezulu nephansi yezimali, isivumelwano esizayo noma inkomba phakathi nesikhathi esinikeziwe. Kubuye kube yisibonakaliso sokungabi namanani entengo.
Ukuhweba okuhamba phambili kubonakala uma intengo ishintsha ngaphakathi kwesiteshi futhi isebenzisa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe, ama-main support kanye namazinga wokumelana angabonakala, evumela umthengisi wezimiso ukuthi enze isinqumo sokuthenga noma ukuthengisa nesicingo kuye uma intengo iseduze nephansi isiteshi noma eduze naphezulu.
Ichazwe njengenani lentengo eyodwa ngokweminye, ngokujwayelekile ngokumelene ne-USD.
Iphumelele P / L
Lena yinzuzo nokulahlekelwa okuvela ezikhundleni ezivaliwe.
Ichazwe njengembuyiselo yezingxenye zokukhokhelwa kwangempela kwesevisi (isb. Ukukhokhiswa kwe-Forex / isaphulelo sokusabalalisa).
Ukubuyisela emuva kubhekisela ekutheni kwenzeke lapho umnotho wezwe uhamba kancane futhi wena ukwehla komsebenzi webhizinisi.
Lona imakethe elawulwayo, ngokuvamile yi-ejensi kahulumeni eveza izinombolo ezinemihlahlandlela nemingcele eyenzelwe ukuvikela abatshalizimali.
Ubuhlobo Bamandla Obuhlobo Ohlobene
Uma amanani emazweni angase ahluke kumkhiqizo ofanayo ngesilinganiso esifanayo esilinganisiwe ngaphezu kwesikhathi esandisiwe. Izizathu zokungafani kwentengo zingabandakanya: izintela, izindleko zokuthumela kanye nokuhluka kwekhwalithi yomkhiqizo.
Inkomba yamandla ehlobene (RSI)
I-oscillator ye-instantum, eyisikhombisa ehamba phambili. Ilinganisa amandla nobubuthakathaka ngokusho kwamanani okuvala esikhathini sokuhweba esibekiwe.
Ibhange lase-Australia (RBA)
Ibhange lase-New Zealand (RBNZ)
I-Central Bank yaseNew Zealand.
Isimo somakethe esenzeka lapho umtshalili eqala ukuhweba ngenani elithile, kodwa umthengisi ubuyisela isicelo ngesilinganiso esihlukile. I-FXCC inikeza amaklayenti ayo ukufinyelela okuqondile kwi-Forex ye-Forex ye-ECN imodeli lapho wonke amakhasimende athola khona ukufinyelela okufanayo ezimakethe ezifanayo zamanzi kanye namabhizinisi akwenziwa ngokushesha, ngaphandle kokulibaziseka noma ukuphindaphinda kabusha.
Ngokuvamile okubizwa ngokuthi "izindawo zokugcina" lokhu kungacatshangelwa: izimali, izimpahla, noma ezinye izimali zezimali, ezigcinwe yiziphathimandla zezimali. Ngokwesibonelo; amabhange asemqoka angasebenzisa izimali ukuze athole imali: ukudayisa ukungalingani, ukulawula umthelela wokushintsha kwe-FX nokubhekana nanoma yiziphi ezinye izinkinga ibhange eliphambili elibhekene nalo. Izimpahla ze-Reserve zivame uketshezi futhi ngokuqondile ngaphansi kokulawulwa kwamandla wezimali.
Kucatshangwa ukuthi kube yimali evikelekile. Ngokuvamile kubanjwe ngamanani amakhulu ngamabhange asezindaweni eziphakathi ukuze kusetshenziselwe ukukhokha izibopho zamazwe ngamazwe.
I-Resistance Point, noma i-Level
Isetshenziselwa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe futhi kungaba intengo noma izinga elizoyeka ukunyakaza kwezinga lokushintshaniswa kwamanye amazwe liya phezulu. Uma izinga liphulwa, kulindeleke ukuthi intengo yensimbi izoqhubeka iya phezulu.
Umdayisi wezokuthengisa wezokuthengisa we-Retail - RFED
Ezimweni lapho ukuthenga okuningi noma ukuthengisa izinto zezimali kungabandakanyi ukuhwebelana, ngabanye noma izinhlangano kudingeka ukuthi ziphathe njengeqembu eliphikisayo. Izenzo ze-RFED ngokuthengiselana ezibandakanya izivumelwano zesikhathi esizayo, izinketho ezinkontileka zesikhathi esizayo kanye nezinkontileka zokukhetha nabathintekayo abangenalo abahlanganyeli abafanelekile.
Abatshalizimali Bokuthengisa Nabahwebi Abathengisa
Uma umtshalili / umhwebi uthengisa noma uthengisa amasheya, ama-CFD, izimali, amasheya, njll nge-akhawunti yakhe siqu, uthathwa njengomtshali-zimali / umdayisi.
I-Index yeZokuthengisa (RPI)
Kuyinto yokushintsha kwezindleko zokuthengiswa kwezimpahla namasevisi. Ngaphandle kwe-CPI, i-RPI iphinde ibe nesilinganiso sokukhuphuka kwemali ezweni elinikeziwe.
Njengokulinganisa okusemqoka kwezomnotho kokusetshenziswa kanye nesibonakaliso samandla ezomnotho.
Lezi zimali zemali emakethe (kusukela ngesikhathi esithile) esetshenziselwa njengenani eliyisisekelo ngabadayisi bemali ukuze banqume noma ngabe inzuzo, noma ukulahlekelwa kutholakale ngosuku. Izinga lokuvuselelwa ngokuvamile libhekwa njengezinga lokuvala lusuku lokuhweba olwedlule.
Ngokuhambelana nokubuza, noma intengo yokunikela yesilinganiso sokushintshaniswa kwamanye amazwe. Ngokwesibonelo; ku-EUR / GBP uma sibona intengo ye-0.86334 - 0.86349, ngakwesokudla ngakwesokudla yi-0.86349. Uhlangothi lwesokunene luhlangothini ukuthi iklayenti lingathenga ngalo.
Ichazwe njengokuchayeka kokuguquguquka okungaqiniseki, ukushintshashintsha kwezinzuzo, noma amathuba okubuyisa okungaphansi kokulindelekile.
Lapho ukuhweba forex, abahwebi kudingeka baqinisekise ukuthi ababeka engozini izimali ezingaphezulu kunezimali liquid esethelwe eceleni ukuhweba. Inhloko yengozi ibhekisela emalini umthengisi uzizwa ekhululekile ngokutshala imali ngenkathi ecabangela ngombhangqwana lwemali.
Kucatshangwa njengokuhlaziya imakethe ye-forex nokukhomba ukulahlekelwa okukhona okungahle kwenzeke ngokutshalwa kwezimali, ngaleyo ndlela besebenzisa amasu okuhweba angasiza ekunciphiseni ingozi yokutshalwa kwezimali.
Inkokhelo yengozi iyigama elisetshenziselwa imali noma izindleko ezikhokhwayo ezisetshenziselwa ukukhokhela iqembu ngokuthatha ingozi ethile.
Uma isikhundla sibanjwe ubusuku bonke, futhi inzalo ivela lapho ikhasimende lingakhokha khona noma lihola endaweni evulekile, kuye ngesilinganiso senzalo esihambisana nayo. I-FXCC izokhipha noma ikhredithi i-akhawunti yekhasimende kuye ngokuthi umehluko wesilinganiso senzalo phakathi kwemali yesisekelo kanye nemali ye-counter kanye nesiqondiso sesimo siklayenti. Ngokwesibonelo; uma iklayenti inesikhathi eside semali yezimali njengoba izinga lokulala kwansuku zonke lwemali eliphansi liphakeme kune-counter counter, iklayenti izothola isikweletu esincane sesikhundla esiphethwe ngobusuku bonke. Uma isimo esibhekene naso sikhona, khona-ke i-akhawunti yeklayenti izoxoshwa ngenxa yokwahluka kwesilinganiso senzalo. Uma iklayenti inesikhathi eside semali ekhokhelwayo ephakeme, kufanele bazuze ngokukwazi ukutshala futhi bathole ukubuya okuphakeme ngobusuku obuningi okufanele bakhokhele ngoba besikhashana imali ephansi yokukhokha.
Kuchazwa njengesenzo sokugcina izikhundla ezivulekile ezivulekile, ngokulindela inzuzo yokucabangela.
Izimali Eziphephile Zokuphepha
Ngezikhathi ze-market turbulence noma ukuphazamiseka kwezemvelo, ukutshalwa kwezimali okulindeleke ukuthi kugcine noma kwandise inani layo, kubizwa ngokuthi 'indawo ephephile'.
Ukuguqulwa Kwamasuku Okufanayo
Ichazwe njengento yokuthengiselana ekhula ngosuku lokuthengiselana okwenzekayo.
Ichazwe njengecebo lokusebenzisa izinguquko ezincane ngentengo. Umhwebi angakwazi ukuzuza ngokuvula ngokushesha futhi evala izinombolo eziningi zezikhundla eziqeshini zokuhweba.
Lokhu kuchaza intengo ephansi kakhulu lapho ukuthengiswa kwemali eyisisekelo ku-pair pair currency kungenziwa khona. Kuwumyalelo wokuthengisa imakethe ngentengo engaphezu kwentengo yamanje.
Ukuthengisa izitoreji kumisa ama-oda abekwe ngezansi kwamanani wokuthenga okwamanje futhi awasebenziswanga kuze kube yilapho inani lentengo yemakethe selikhona, noma ngaphansi kwentengo yokuma. Thengisa ama-oda we-stop, once once aqala, abe oda ezimakethe ukuthengisa emakethe intengo yamanje.
Kuyinto ukuthengiswa kwemali engeyona yomthengisi.
Lona usuku lapho i-oda elikhishwe kufanele lixazululwe ngokudluliswa kwezinsimbi, noma izimali kanye nezimali phakathi komthengi nomdayisi.
Ibonisa ukuthi ivulekile isikhundla esadalwa ngokuthengisa imali.
Kuyenzeka uma kunesimo esibi kakhulu emakethe futhi kuchazwa ngokuthi umehluko phakathi kwentengo elindelekile kanye nentengo eyayitholakala emakethe futhi isetshenziselwa ukwenza umsebenzi. I-slippage akudingeki ibe yinto engalungile ngaso sonke isikhathi, futhi amaklayenti e-FXCC angahle athole ukuhleleka okuhle, owaziwa ngokuthi ukuthuthukiswa kwentengo.
Umphakathi we-Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Swift).
Ukudluliswa kwemali kanye neminye imisebenzi yezezimali kwenziwa nge-Swift, njengoba kuyisihlalo sokuxhumana sokushintshanisa ngolwazi lwezezimali.
Isikhathi lapho kunabathengisi abaningi kunabathengi, okuholela ezintweni eziphansi ngenxa ye-surplus yokunikezwa ngokwezimali.
Usomabhizinisi wezezimali ososayensi
Uma umtshali-mali enolwazi olwanele nolwazi lwezimakethe zezimali zangaphandle, kulindeleke ukuba ahlole izingozi zethuba lokutshala izimali.
Kuthunyelwa engozini uma uhulumeni engakwazi noma engathandi ukuhlangabezana nokukhokha izikweletu.
Ukuhweba, isibonelo, ukushintshaniswa kwamanye amazwe kuyinto eqondile; akukho isiqinisekiso sokuthi labo abatshale imali ku-FX bazozuza kulokhu okuhlangenwe nakho. Amaklayenti angahle alahlekelwe umkhawulo wawo wonke ogcinwe, okwenza ukuhweba kwe-FX kucabange kakhulu. Lokho ukuhweba kwamanye amazwe kufanele kube yingozi engozini kuphela ebhekwa njengengozi yemali, echazwa ngokuthi inani lokuthi uma elahlekile ngeke lishintshe indlela yokuphila komthengi, noma indlela yokuphila komndeni wabo.
Isimo emakethe ye-Forex sichazwa njengokunyakaza okuhle noma okungalungile entweni yentengo, ngokuvamile ehlala isikhathi esifushane.
Izimakethe ze-Spot zakhele ezindleleni zezinsimbi zezimali ezithengiswa ngokushesha futhi imiyalo ixazululwa ngokushesha, njengoba abahlanganyeli emakethe ye-forex bengayitholi noma banikeze imali engokwenyama abayithengisayo.
Inani lentengo / isilinganiso
Kuyinto intengo yensimbi engathengiswa noma ithengwe emakethe.
I-Spot Settlement Basis
Yinkambiso eqinisekisiwe yokuxazulula ukuthengiselana kwamanye amazwe lapho usuku lokubaluleka lubekwa izinsuku zebhizinisi ze-2 kusukela osukwini lokuhweba.
Umehluko phakathi kwamanani anikezwe oda okusheshayo (cela intengo) nokuthengiswa ngokushesha (intengo yebhidi) yezinkampani zemali.
Kuyinkinga yezomnotho ezweni lapho kukhona ukukhuphuka kwemali ephezulu kanye nenkinga yokuntuleka kwemisebenzi ephezulu, okwenza ukukhula komnotho okuphuthumayo nokwenyuka kwamanani.
Isimo lapho kungekho sikhundla esivulwayo kanye nokuthengwa komthengi nokudayiswa kubhalansi.
Inkatho ejwayelekile emibhalweni yokuhweba kwangaphambili, iyalingana neyunithi ye-100,000 ye-currency yasebhange ku pair pair currency trading pair. I-standard evamile ingenye yezinto ezintathu ezijwayelekile ezaziwa, ezinye ezimbili ziyi-mini-lot kanye ne-micro-lot. Inani elijwayelekile liyiyunithi ye-100,000 yenani lemali, i-mini-lot imelela i-10,000, inkampani encane imelela amayunithi we-1,000 kwanoma iyiphi imali. Ukunyakaza kwe-single-pip for lot standard kuhambisana noshintsho lwe $ 10.
Ukubopha inzalo kuchazwa ngokuthi uhlobo lomgomo wezimali, lapho ibhange eliphakathi libeka khona umphumela wemiphumela yokungena kanye nokuphuma kwemali ekunikezeni imali yasekhaya. Ukubopha inzalo kuhilela ukuthengwa noma ukuthengiswa kwezimpahla zezimali ngebhange eliphakathi, imiphumela yokunciphisa ukungenela kwamanye amazwe. Inqubo yokuzalisa inzalo ibonisa ukubaluleka kwemali yasekhaya ngokuphathelene nomunye, iqaliswe emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe.
Iphadi laseBrithani, okunye okubizwa ngokuthi ikhebula ngenkathi kuhweba ibhangqa lemali GBP / USD.
I-Stochastic (Stoch) izama ukujwayelekile ukwenza intengo njengephesenti phakathi kuka-0 no-100. Ngemizila ye-stochastic, imigqa emibili ihlelwe, imigqa esheshayo futhi ehamba kancane. Kuyinto inkomba evumayo yokuqhafaza ezobuchwepheshe esetshenziselwa abahwebi ukuba bakhethe amandla amathrendi.
Misa i-oda lokulahlekelwa
Lona uhlobo oluthile olubekwe iklayenti ukuvala isikhundla uma intengo isuka ekuhambeni okuhlukile kwesikhundla ngezinga elithile lamapayipi. Ezimweni eziningi ukuyeka ukulahlekelwa kwama-oda kukhishwa ngokushesha nje uma imakethe ifinyelela, noma ihamba ngezinga lokumiswa kwamaklayenti. Uma usukhishwe, i-stop stop izobe isalindile kuze kutholakale intengo yokuma. Imiyalo yokuyeka ingasetshenziswa ukuvala isikhundla (ukuyeka ukulahlekelwa), ukuguqula isikhundla, noma ukuvula isikhundla esisha. Ukusetshenziswa okujwayelekile kakhulu kwe-oda lokuyeka ukuvikela isikhundla esivele sikhona (ngokunciphisa ukulahlekelwa, noma ukuvikela ukuzuza okungakafiki). Uma imakethe ishaya, noma ihamba ngentengo yokumisa, umyalelo usebenze (ucushiwe) futhi i-FXCC izokhipha umyalo kumanani alandelayo atholakalayo. Misa ama-oda akuqinisekisi ukukhishwa kwentengo yokuma. Izimo zeMakethe kufaka ukungazitholi kanye nokuntuleka kwevolumu kungabangela ukuba umyalo wokuyeka usebenze ngentengo ehlukile kune-oda.
Misa iNani lentengo
Lokhu kuchazwa njengamanani lapho iklayenti efake khona intengo evuselela umyalelo wokulahlekelwa kokuyeka.
Lapho ngaphakathi komnotho kunesimo eside eside sokungasebenzi, kubizwa ngokuthi Ukungasebenzi Kwezingqalasizinda. Isizathu singase sibe ngenxa yokushintsha okuyisisekelo emnothweni obangelwa yizinto ezihlukahlukene, ezifana nobuchwepheshe, ukuncintisana kanye nenqubomgomo kahulumeni.
Zisetshenziselwa ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe ukuze kuboniswe izinga lefa lapho intengo kulindeleke ukuthi ibe nobunzima bokuphula futhi izozilungisa ngokuzenzekelayo.
Ukushintshwa kwemali ukuboleka okwamanje kanye nokuboleka kwesamba esifanayo semali enikeziwe ngesilinganiso sokushintshanisa phambili.
Vula / Ukulondoloza
Uma iklayenti ye-FXCC ine-P / L kwelinye imali ngaphandle kweDola lase-US, i-P / L kumele iguqulwe ekupheleni kosuku ngalunye lebhizinisi emaDola ase-US, ngesilinganiso sokushintshanisa esasikhona ngaleso sikhathi (esaziwa njengezinga lokuguqulwa ). Le nqubo ibizwa ngokuthi iyaqhubeka. Kuze kube yilapho i-P / L ichithwa, inani le-akhawunti lekhasimende lizoshintsha kancane (phezulu noma phansi), njengezinga lokushintshanisa ngenzuzo yokulahlekelwa kanye nokushintshwa kwemali. Ngokwesibonelo; uma iklayenti inenzuzo ku-yen, uma inani le-yen liphakama ngemuva kokuthi kuvaliwe isikhundla, kodwa ngaphambi kokuba inzuzo isuke idonsa emarereni, inani le-akhawunti lizoshintsha. Ushintsho lukhona kuphela kwinani lentengo / ukulahlekelwa, ngakho-ke umphumela awuncane.
I-Society ye-Interbank Telecommunications yomhlaba wonke iyinkampani yaseBelgium esekelwe inethiwekhi yomhlaba wonke yokukhokhela ukuthengiselana kwezimali zangaphandle. Umphakathi uphinde unesibopho sokwenza amakhodi wemali asetshenziselwa ukuqinisekiswa nezinhloso zokuhlonza (ie USD = US Dollars, EUR = I-Euro, JPY = Yen Japanese)
Le nguqulo yecebo lokuhweba eliqaphile eliphethe isikhundla evulekile kusuka kwesinye (kuya ezinsukwini ezimbalwa) ngomzamo wokuzuzisa ekushintsheni kwentengo, okuvame ukubizwa ngokuthi 'ukuguquka'.
I-Market slang yeSwitzerland yaseFrance, i-CHF.
Thatha Inzuzo Yomhlomulo
Yimyalo ebekwa iklayenti ngenani elichazwe ngaphambili uma amanani emakethe afika ezingeni elifisa, umyalelo uzovalwa. Uma lo myalelo usuqedile, kungabangela inzuzo yohwebo olunikeziwe.
Ukuhlaziywa kobuchwepheshe kusetshenziswa izitayela zamanani nezembalo zamanani emlandweni wokuzama ukubikezela isiqondiso samanani.
Kuchazwa ngokuthi kwenzeka ukwehla kwamanani emakethe uma kungekho isizathu esiyisisekelo sokunciphisa. Isibonelo kungaba lapho intengo ibuyela ekumeni okunamandla emva kokuqeda ngokushesha.
Isilinganiso esiphakathi kwamanani wezindleko zokuthekelisa nokungeniswa kwezwe.
Izinkomba zobuchwepheshe zisetshenziselwa umzamo wokubikezela izitayela zemakethe esizayo. Kuyingxenye ebalulekile yokuhlaziywa kwezobuchwepheshe okusetshenziselwa iphethini leshadi futhi yenzelwe ukuhlaziya ukunyakaza kwentengo yesikhathi esifushane.
Ichazwa njengemakethe lapho kungekho abathengisi nabathengi abaningi, okusho ukuthi kunomsindo ophansi wokuhweba futhi ukuthengiswa kwezinto ezijwayelekile zokuthengiswa kwezimboni kuphansi.
Lokhu kuchazwa ngokuthi ushintsho oluncane ngentengo, phezulu noma phansi.
Kusasa ngokulandelayo (Tom olandelayo)
Kusasa ngokulandelayo kuhilela izikhundla ezivaliwe ngosuku oluthile lwebhizinisi esilinganisweni sokuvala bese kuvuleka kabusha ngosuku olulandelayo. Ukulethwa kwezinsuku ezimbili (2) emva kosuku lokuthengiselana. Kuyinto yokuthenga nokuthengiswa kwemali ehambisanayo ukuze ugweme noma yikuphi ukulethwa kwangempela kwemali.
Umlando wokuhweba ukusebenza, ngokuvamile ochazwa ngokuthi i-curve isivuno.
Lona usuku lapho kwenziwa khona ukuhweba.
Ukulahleka kwezezimali kwenzeka lapho izwe lineningi elingeniswe ngaphandle kwezingaphandle. Kungumnotho we-balance balance yezohwebo futhi uveza ukuphuma kwemali yasekhaya emakethe angaphandle.
Ukuthenga noma ukuthengisa kwanoma yiziphi izimpahla, amasevisi nezinsimbi namanye amaqembu. Ukuhweba nge-forex kungachazwa ngokuthi ukucabangela ngokushintsha kwesilinganiso sezimali zakwamanye amazwe.
Ukuhweba amadeski nakho kwaziwa nangokuthi 'ama-desks deal'. Yilapho ukudayiswa nokuthengwa kwempahla kwenzeka khona futhi kungatholakala kumabhange, izinkampani zezezimali, njll. Zinganikeza abadayisi ngokukhipha okusheshayo kwemiyalo yabo.
Isicelo sesofthiwe lapho iklayenti ingahlinzeka khona ukwenza ukuthengiselana egameni lekhasimende. I-FXCC-MT4 (i-MetaTrader 4) yisibonelo se-platform yokuhweba.
Isitoreji sokulandelela sisetshenziselwa ukuvikela ukuzuza okuvela emabhizinisini athile ngokugcina ukuhweba kuvulwe futhi kuvumela ukuqhubeka kwenzuzo (inzuzo) uma nje intengo ishukuthela esiqondisweni esifisa. Akusethiwe ngesamba esisodwa kodwa iphesenti ecacisiwe.
Lokhu ukuthenga, noma ukuthengisa, isibonelo, inani lokushintshaniswa kwamanye amazwe elivela ekusebenzeni komyalelo.
Lokhu kuyindleko yokuthenga, noma ukuthengisa ithuluzi lezezimali.
Lona usuku lapho kuhweba khona.
Lapho izinkampani zihlanganyela ekuhwebeni ngamazwe ngamazwe, ingozi ababhekene nazo yiyokuhweba kokuthengiselana, uma ngabe izinga lokushintshanisa imali lizoshintsha ngemuva kokuba inhlangano ingene kuzibophezelo zezezimali.
Ukuqondiswa kwemakethe noma intengo, ngokuvamile kuvumelana namazwi: "Ukukhishwa, okuqinile, noma okuhlangene" (okubekwe eceleni) futhi kungaba yisikhathi esifushane, isikhathi eside noma okusheshayo.
Lokhu kuyindlela yokuhlaziywa kobuchwepheshe (i-indicator), futhi ibizwa ngokuthi ukuguqulwa okulinganayo. Imigqa yethrekhi ingasebenza njengamathuluzi alula, ukuthola izitayela ngokuhlela umugqa ofanele kakhulu kuwo wonke: amanani aphansi, aphezulu, noma avaliwe nokuvula.
Inzuzo ifana nencazelo yevolumu futhi imele inani lenani lemali lazo zonke izinkokhelo ezenziwa ngesikhathi esithile.
Yingcaphuno ebonisa ibhidi bese icela intengo emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe.
Yigama lesimo sokuvuleka.
Uma izinga lokushintshanisa ngemali lingaphansi kwamandla alo wokuthenga, kubhekwa ukuthi alilinganiselwe.
Amaphesenti wabasebenzi abasebenza njengamanje.
Ingaziwa P / L
Yisikhathi sokuba inzuzo yangempela noma ukulahlekelwa kunikezwe ngenani lokushintshaniswa kwamanje. Isibonelo, uma iklayenti inquma ukungena ngemvume ye-pair pair currency, yena uzodinga ukuthengisa ngentengo yokubiza kanti i-P / L engenakulondolozwa igcine kuze kube yilapho indawo enikeziwe ivaliwe. Uma ivaliwe, i-P / L izobe yengezwe noma isuswe emalini asele edifini, ukuze uthole imali entsha kwi-deposit amount.
Lona ukucaphuna kwentengo entsha ehamba ngentengo ephakeme ngokuhambisana nesilinganiso esandulele.
I-Prime Prime yase-US
Isilinganiso senzalo esetshenziselwa amabhange ase-US ukuboleka kumakhasimende abo noma abahwebi bezinkampani ezinkulu.
Leli ithenda elingokomthetho le-United States of America, elimelelwa njenge-USD lapho liqhuba ukuthengiselana kwamanye amazwe.
Inkomba ye-dollar (USDX) ilinganisa ukubaluleka kwedoli lase-US ngokubaluleka kwebhakethi yezimali zezakwethu ezibalulekile zokuhweba zase-USA. Njengamanje, le nkomba ibalwa ngokufaka amazinga okushintshaniswa kwezimali eziyisithupha ezinkulu zezwe: i-euro, i-Japanese, i-dollar yaseCanada, i-pound yaseBrithani, isi-Swedish krona neSwitzerland franc. I-euro inesisindo esikhulu kunazo zonke nge-dollar ku-index, eyenza i-58% yenani lokulinganisela, elilandelwa yin ne-14%. Inkomba yaqala ku-1973 ngesisekelo se-100, amanani kusukela ngaleso sikhathi ahlobene nalesi sisekelo.
Iphethini okukhulunywe ngayo ngabahlaziyi bezobuchwepheshe, lapho kubhekwa khona njengesignali yokuguqula isimo.
Yisikhathi lapho ukushintshaniswa kwezinkokhelo phakathi kwabalingani bokuthengiselana kwezezimali kwenzeka. Usuku lokuvuthwa lokuthengiselana kwemali yendawo indawo evamile izinsuku ezimbili zebhizinisi (2) kusukela lapho kuvulwa isikhundla.
I-VIX iyisimboli se-ticker ye-CBOE Volatility Index, isilinganiso esithandwayo sokungazwakali kwezinkomba ze-SPX; i-VIX ibalwa yi-Chicago Board Options Exchange (CBOE). Uma ukufundwa kwe-VIX kuphezulu, abashalizimali nabathengisi bakholelwa ukuthi ingozi yokuhweba iphakanyisiwe; ukuthi izimakethe zokulingana eziyinhloko zingase zibe yisikhathi sokushintsha. I-VIX isinikeza ukuhlukana okujwayelekile okungamatshumi amathathu okuhamba kwe-movement kwe-SPX. Isibonelo, ukufundwa kwe-20% kungalindela ukuhamba kwe-20%, phezulu noma phansi, ezinyangeni eziyishumi nambili ezilandelayo.
Ichazwe njengendlela yokulinganisa kwamanani, okungalinganiswa ngokusebenzisa ukuphambuka okujwayelekile noma ukungafani phakathi kokubuyiswa kwesithuluzi esifanayo.
Ukubalwa kwenani lemisebenzi yokuhweba ethile: ukulingana, lwemali pair, impahla, noma inkomba. Ngezinye izikhathi kubhekwa njengenani lezinkontileka ezithengiswa phakathi nosuku.
Ichazwa ngokuthi "iseva yangasese yangasese". Ukufinyelela okunikezelwe kwisiphakeli esikude, okuvumela abahwebi ukuthi balayishe futhi basebenzise ama-EA abo kude, bakwazi ukudayisa i-24 / 5 ekunciphiseni isikhathi eside, ngaphandle kokudinga ukuba amakhompyutha abo asebenze. Insizakalo ngeFXCC inikezwa yi-BeeksFX.
Khanyisa i-Pattern Pattern
Le iphethini ibonisa ukuhlanekezela komkhuba, manje okwakhiwe ngaphakathi komgqa. Ama-Wedges afana nesimo sezinxantathu, enesisekelo sokusekelwa nokumelana nemifino. Le iphethini leshadi liyisibonelo sesikhathi eside esikhombisa ububanzi bokunciphisa amanani.
Ichazwe njengesimo semakethe ehlukumezekayo, lapho ukunyakaza kwentengo ebukhali kulandelwa ngokushesha ngokuguqulwa okubukhali.
Imelela ukuthi kwenzeke uma imali ikhokhelwe ngobuningi ezikhungweni zezimali nakwamabhange, kunokuba amanani amancane ngokuqondile kubatshali bamancane.
I-Index Price Price
Kuyinto intengo yebhaksi elimelelekile lezimpahla ezigcwele kanye nesilinganiso sokushintsha kwentengo emkhakheni wokukhiqiza nokusabalalisa umnotho. Ngokuvamile kuholela inkomba yamanani wabathengi nge-60 ezinsukwini ezingu-90. Ukudla nezindleko zezimboni zivame ukuhluzwa ngokuhlukana.
Usuku lapho amabhange asezindaweni zezezimali zemali evulekile ibhizinisi, isibonelo, iholidi yasebhange e-US, njengoSuku lokubonga, lingasho ukuthi akulona usuku olusebenzayo kunoma yiliphi iqembu elibanjwe ngokusekelwe e-USD.
Liyisikhungo sezezimali emhlabeni jikelele esakhiwa ngamalungu e-IMF abasizayo ekuthuthukiseni amazwe asebhange ngokukweleta imali lapho imali engasese ingatholakali khona.
Eyaziwa ngokuthi umnikezeli wezohwebo noma umdayisi wesimo sezimali.
I-slang engavamile isetshenziselwa isigidi sezigidi.
Kuchazwa ngokuthi ukubuyiselwa kwezimali eziyinhloko.
Yimizila ehlela amazinga ezithakazelo ngesikhathi esithile lapho izinsimbi zinekhwalithi efanayo yekhredithi kodwa izinsuku ezincane noma ezivuthiwe. Isetshenziselwa ukunikeza umqondo womsebenzi wezomnotho okulindeleke esikhathini esizayo, kanye nokushintsha kwesilinganiso senzalo.
Unyaka onyakeni. Ukusetshenziswa okusetshenziselwa ukubala ukushintsha kwamaphesenti ezinkampanini ngaphezu kwonyaka wonyaka / ngonyaka.